iWatermark प्रो मैन्युअल म्याक र जीत पृष्ठ (JP)
iWatermark प्रो の マ ッ ク ＆ ウ ィ ン ヘ ル プ
iWatermark प्रो म्याक र विन्डोज को लागी iWatermark को नयाँ संस्करण हो। iWatermark म्याक, विन्डोज, आईफोन / आईप्याड, र एन्ड्रोइड को लागी संसारको नम्बर १ पानी मार्किंग अनुप्रयोग हो। स्टाइलिश प्रतिलिपि आफ्नो सबै छविहरु एक दृश्य डिजिटल वाटरमार्क मिनेट भित्र। iWatermark प्रो फोटोग्राफर र डिजिटल क्यामेराको साथ जो कोहीको लागि एक आवश्यक उपकरण हो, पेशेवर वा सुरुवाती।
iWatermark वाटरमार्क फोटोहरु को लागी एक विशेष उपकरण हो। फोटोशप भन्दा अधिक कुशल, छिटो, सरल र धेरै कम खर्चिलो। आईवटरमार्क विशेष रूपमा वाटरमार्किंगका लागि डिजाइन गरिएको हो।
आईवटरमार्क प्रो मार्क फ्लेमिंग र जुलियन मिलर द्वारा सिर्जना गरिएको हो। मिशेल जाम्परो द्वारा कलाकृति।
के तपाई आई-वाटरमार्क प्रो लाई तपाईको मातृभाषामा अनुवाद गर्न चाहानुहुन्छ? हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस।
सबै iWatermark सफ्टवेयर को तालिका
म्याक र विनको लागि आईवटरमार्क प्रोको पुरानो संस्करणहरू
बाट लाइसेन्स अन्तर्गत दराज आइकनहरू प्रयोग गरियो बेअर हड्डी सफ्टवेयर, Inc. तिनीहरूले महान सफ्टवेयर बनाउँछन्।
म्याट जेमेल द्वारा MAAttachedWindow कोड।
iWatermark प्रो लागत $ 30। यसको प्रयास पछि कृपया हाम्रोमा जानुहोस् स्टोर खरीद गर्न। तपाईंको अघिल्लो वाटरमार्कहरू iWatermark बाट iWatermark प्रोमा आयात गर्न उन्नत ट्याबमा जानुहोस् आयात बटन प्रयोग गर्नुहोस् पुरानो वाटरमार्क र सेटि settingsहरू लोड गर्न।
प्रश्नहरूको लागि पहिले, म्यानुअल जाँच गर्नुहोस् र यदि त्यसले उत्तर दिँदैन भने भ्रमण गर्नुहोस् समर्थन पृष्ठ।
यदि तपाईंसँग दर्ता मुद्दा क्लिक छ भने यहाँ जानकारी को लागी। यदि त्यसले सहयोग मा जान सकेन भने समर्थन पृष्ठ।
केहि सुविधाहरूको सूची
iWatermark प्रो iWatermark को उत्तराधिकारी र एक पूर्ण पुनर्लेखन हो जुन कोको, Xcode, र भर्खरको एप्पल टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ। iWatermark प्रो सबैभन्दा परिष्कृत वाटरमार्किंग अनुप्रयोग उपलब्ध छ।
वाटरमार्क प्रकारहरूको संख्या 8 प्रत्येक फरक उद्देश्यको लागि उपयोगी।
एकै साथ 1 वा धेरै वाटरमार्कहरू प्रयोग गर्नुहोस् असीमित (मेमोरीमा आधारित)
वाटरमार्क १ वा फोटोहरूको असीमित संख्याको ब्याच असीमित (मेमोरीमा आधारित)
वाटरमार्क प्रकारहरू पाठ, बिटमैप, लोगो, हस्ताक्षर, भेक्टर, लाइन्स, QR, पाठ मा आर्क, पाठ ब्यानर, बोर्डर, मेटाडाटा र Stegomark
गति Xx वा अधिक छिटो, bit4बिट
समानान्तर प्रशोधन अवेयर बहु-थ्रेडेड बहुविध CPU / GPU को प्रयोग गर्दछ
इनपुट कार्य साइज, रिजोल्युसन, नाम, ढाँचा, आदिमा इनपुट फोटोहरू फिल्टर गर्नुहोस्...
आउटपुट कार्यहरू वाटरमार्क, आकार बदल्नुहोस्, पुन: नामकरण गर्नुहोस्, थम्बनेलहरू सिर्जना गर्नुहोस्, मेटाडेटा थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्।
AppleScriptable (केवल म्याक) हो, स्क्रिप्ट र स्क्रिप्ट मेनू समावेश गर्दछ
Win एक्सप्लोररका लागि शेल विस्तार वाटरमार्क सिधा लागू गर्न दायाँ क्लिक गर्नुहोस्।
रंग प्रोफाइलहरू अवस्थित र चयन योग्य प्रोफाइलहरू प्रयोग गर्दछ
उत्पादन 10 विभिन्न प्रकारका आउटपुट सेटिङहरू
आउटपुट फाइल प्रकारहरू jpg, png, tiff, psd, bmp, jpeg २०००, clipb
प्रत्यक्ष पूर्वावलोकन हो, र पूर्वावलोकन विन्डोबाट साझा गर्नुहोस्
वाटरमार्क आयात गर्नुहोस् हो, म्याक वा विन संस्करणबाट
वाटरमार्क निर्यात गर्नुहोस् अभिलेख गर्नुहोस् वा म्याक वा विन संस्करणमा साझेदारी गर्नुहोस्
वाटरमार्क सम्पादन गर्नुहोस् अनुकूलन वाटरमार्कहरू सिर्जना गर्नुहोस्, नक्कल गर्नुहोस्, मेटाउनुहोस्, प्रदर्शन गर्नुहोस् र कुनै पनि समय सेटिङहरू सम्पादन गर्नुहोस्।
वाटरमार्क ड्रअर तपाईंका सबै वाटरमार्कहरू राख्न, व्यवस्थित, सम्पादन, लक, पूर्वावलोकन, साझेदारी र ट्यापमा प्रयोग गर्ने ठाउँ।
मेटाडाटा XMP, EXIF, IPTC र Google खोज मेटाडेटा
मेटाडाटा थप्नुहोस् / हटाउनुहोस् IPTC / XMP / GPS
वाटरमार्कमा इम्बेड मेटाडाटा IPTC / XMP / GPS
वाटरमार्कको रूपमा मेटाडाटा ट्यागहरू फोटोहरूमा जानकारी हेर्नको लागि पाठ वाटरमार्कहरूमा IPTC, Tiff, फाइल विशेषताहरू, Exif, GPS, ट्यागहरू थप्नुहोस्
प्रभाव इम्बोस, नक्काशी, उल्टो, रूपरेखा, कालो छाया, सेतो छाया, आदि...
वाटरमार्क स्थान ड्र्याग वा xy द्वारा सेट
स्केल वाटरमार्क वास्तविक (सापेक्ष), तेर्सो र ठाडो (निरपेक्ष प्रतिशत)
पाठ वाटरमार्क ढाँचा फन्ट, साइज, रङ, रोटेशन, पारदर्शिता, छाया, किनारा, आदि...
पृष्ठभूमि रंग, अस्पष्टता, स्केल, बोर्डर, छाया, रोटेशन
मदत अनलाइन, प्रासंगिक र विस्तृत
वाटरमार्कको रूपमा QR कोडहरू QR कोडहरू वॉटरमार्कको रूपमा प्रयोग सिर्जना गर्नुहोस्
क्रिएटिव कमन्स वाटरमार्क सजिलैसँग कुनै पनि CC वाटरमार्क थप गर्दछ
द्रुत लुक प्लगइन निर्यात गरिएको वाटरमार्क जानकारी प्रदर्शित गर्दछ
सबै फोटो ब्राउजरहरूको साथ काम गर्दछ हो
निर्यात र साझेदारी गर्नुहोस् ब्याकअप, तपाइँका अन्य उपकरणहरू र साथीहरूमा वाटरमार्क साझा गर्नुहोस्।
प्रयोग गर्न सजिलो गम्भीरतापूर्वक, प्रयोग गर्न सजिलो
मूल फाइलहरू डुप्लिकेट र ती वाटरमार्कहरू। तपाईंको मूल फाइलहरू कहिल्यै छुने छैन। र पूर्वनिर्धारित रूपमा तपाईंको मूल फाइलहरू ब्याकअप गर्दछ। वा तपाइँ यसलाई Advanced:Prefs मा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ
किन अन्य कार्यक्रमहरूमा आईवटरमार्क प्रो प्रयोग गर्दछ
आईवटरमार्क फोटोशपभन्दा कम महँगो, छिटो र सजिलो छ किनकि यो विशेष रूपमा वाटरमार्किंग र पेशेवर फोटोग्राफरहरूको कार्यप्रवाहको लागि डिजाइन गरिएको थियो।
iWatermark म्याक, विन्डोज, आईओएस, र एन्ड्रोइड को लागी बनाइएको हो। iWatermark प्रो। यी अनुप्रयोगहरू बीच वाटरमार्क साझेदारी २०१ 2017 को सुरूवात सम्भव हुनेछ
११ वाटरमार्क प्रकारहरू। अन्य अनुप्रयोगहरूमा केवल १ वा २ छ।
iWatermark ले फाईलहरूको समूहको नाम, फिल्टर इनपुट फाइल, र फोटो फाइलहरूको पुनःआकार गर्न सक्दछ।
आईवटरमार्कले कच्चा छविहरू प्रकृया गर्दछ जुन धेरै गर्दैन।
आईवटरमार्कले फोटोहरूको ब्याच प्रसंस्करणको बेला आईपीटीसी / एक्सएमपी जानकारी थप्न वा हटाउन सक्छ।
महत्वपूर्ण - आईवटरमार्कको साथ तपाईं ब्याचमा विभिन्न रिजोलुसन र अभिमुखिकरणका फोटोहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र अझै पनि प्रत्येक फोटोमा वाटरमार्क समान देखिएको कारण स्केलिंग उपकरण स्केलको अर्थ भनेको वाटरमार्कले चौडाईको सटीक प्रतिशत लिन सक्दछ प्रत्येक तस्वीरको रिजोलुसन वा अभिमुखीकरणको फरक पर्दैन।
iWatermark एक परिष्कृत वाटरमार्क सम्पादक छ कि पाठ, पाठ चाप, पाठ ब्यानर, ग्राफिक, भेक्टर, लाइन, QR, मेटाडाटा र आकार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क।
आईवटरमार्कले वाटरमार्क सिर्जना गर्न सक्दछ जुन आईपीटीसी / एक्सएमपी डाटालाई एम्बेड गर्छ जब यो दृश्य वाटरमार्कको साथ वा बिना प्रयोग गरिएको प्रत्येक पटक हुन्छ। समाचार संगठनहरूका लागि उत्कृष्ट।
iWatermark एकदम छिटो छ जुन फाईल आकार र ब्याचको प्रशोधन बढ्दै जाने क्रममा महत्वपूर्ण छ।
iWatermark ले सबै वाटरमार्कहरूको डाटाबेस राख्दछ जुन क्लिकको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ फोटोशप जस्ता अनुप्रयोगहरू छन् जुन छविलाई वाटरमार्क गर्न सक्दछ तर आईवटरमार्कमा वाटरमार्क प्रबन्धक छ जसले सयौं वाटरमार्कहरू ट्र्याक गर्न सक्छ। प्रबन्धकले लक गर्न / अनलक गर्न, इम्बेडिंग आईपीटीसी / एक्सएमपी, खोजी, पुन: नामाकरण, मेटाउने, पूर्वावलोकन, मर्ज, निर्यात, ब्याच प्रोसेसिंग र वाटरमार्कको साझेदारीलाई पनि अनुमति दिन्छ।
महत्वपूर्ण: तपाईंको मूल फाईलहरू कहिल्यै नहटाउनुहोस्। वाटरमार्किंगले तपाईंको मूल फाइलको प्रतिलिपि गर्दछ र यसमा दृश्यमान वाटरमार्क थप गर्दछ। iWatermark मूल परिवर्तन गर्दैन यो मात्र एक प्रतिलिपि बनाउँछ। त्यसो भए, सुरक्षित राख्ने को लागी सँधै आफ्नो मूल unwatermarked फाइलहरु राख्नुहोस्। यो सायद तपाइँलाई पूर्ण रूपमा प्रस्ट छ तर नविकाहरूको लागि भनिनु पर्छ।
म्याक: हाम्रो साइटबाट डाउनलोड गर्नुहोस् र अनुप्रयोग फोल्डरमा ड्र्याग गर्नुहोस्। IOS मा प्रयोग गरिएको फन्टहरू स्थापना गर्न यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र फन्टहरू स्थापना गर्नुहोस् जुन तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ:
Windows: स्थापना र स्थापनाकर्ता प्रयोग गरेर स्थापना गर्नुहोस्।
फन्टहरू: एन्ड्रोइड र आईओएस मा प्रयोग फन्ट स्थापना गर्न यो फाईल डाउनलोड गर्नुहोस् र अनजिप गर्नुहोस् र फन्टहरू स्थापना गर्नुहोस् जुन तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
महत्वपूर्ण: विन्डोज प्रयोगकर्ताहरू उच्च-रिजोलुसन प्रदर्शनका साथ। सबै भन्दा राम्रो प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस अनुभव को लागी iWatermark प्रो अनुप्रयोग को लागी विन्डोज OS सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस्. यी २ सरल निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
१. ठीक छ, iWatermark प्रो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र अनुकूलता चयन गर्नुहोस् र उच्च DPI सेटिंग बटन परिवर्तन चयन गर्नुहोस् त्यसोभए "ओभरराइड हाई डीपीआई स्केलिंग" चयन गर्नुहोस् र प्रणालीमा सेट गरिएको (वर्धित)। तलको स्क्रीनशटमा देखिएको।
२. यो संवाद हेर्न डेस्कटपमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस्। तलको स्क्रीनशटमा देखिने प्रदर्शन सेटि .हरू ट्याप गर्नुहोस्।
'प्रदर्शन सेटिंग्स' परिवर्तन गर्नुहोस् (वैकल्पिक) मा देखिएको स्क्रीनशट तल, तपाईंको स्वादमा र तपाईंको आँखामा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईंलाई iWatermark विन्डोज एकदम सानो छ भने, प्रदर्शन सेटिंग १ 150०% वा २००% मा समायोजन र iWatermark अनुप्रयोगको 'अनुकूलता' सेटिंग्स समायोजित गर्नुहोस् (माथि चरण १ मा) विन्डोज अप स्केल गर्न। त्यसो भए तपाईले सेट गर्नुभयो। IWatermark को लागी यी सेटिंग्स को अपग्रेड मा सम्झना गरीन्छ।
द्रुत सुरु ट्यूटोरियल
यद्यपि आईवटरमार्कले धेरै चीज गर्न सक्दछ (पुन: आकार, पुन: नामाकरण, इत्यादि) सबैभन्दा सामान्य प्रयोग छविहरू वाटरमार्कमा हो। यो आधारभूत ट्यूटोरियलले तपाईंलाई फोटोमा वाटरमार्क राख्नमा मार्गदर्शन गर्दछ। स्क्रिनशटहरू म्याकमा सिर्जना गरिएको थियो तर विन्डोज संस्करणमा मूल रूपमा उस्तै देख्नु पर्छ।
प्रक्रिया गर्नुहोस् वा 'इनपुट भेल' मा फोटो वा फोटोहरू र / वा फोटोहरूको फोल्डरहरू प्रक्रिया गर्नुहोस्।
वाटरमार्क वा वाटरमार्कहरू छान्नुहोस् / हाइलाइट गर्नुहोस् (हो, iWatermark एक पटकमा एक भन्दा बढी वाटरमार्कको साथ वाटरमार्क गर्न सक्दछ) दायाँको वाटरमार्क ड्रअरमा।
तपाईंको डेस्कटपमा एक फोल्डर सिर्जना गर्नुहोस् र 'आउटपुट ठीक' मा चयन वा ड्र्याग गर्नुहोस्।
स्टार्ट प्रोसेसिंग बटन थिच्नुहोस्।
भयो! तपाईंको वाटरमार्क गरिएका छविहरूका लागि आउटपुट फोल्डर जाँच गर्नुहोस्
महत्वपूर्ण: तपाईं एक तस्वीर वा फोटोहरूमा एकै साथ प्रयोग गर्न चाहानु भए जति धेरै देख्न सक्ने वाटरमार्कहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटकमा केवल १ मेटाडाटा वा फोटो वा फोटोहरूमा स्टेगोमार्क हुन सक्छ।
वाटरमार्क प्रबन्धकमा चयन गरिएको प्रत्येक वाटरमार्क फोटो वा ब्याचमा प्रत्येक फोटोमा थपिन्छ। तपाईं सामान्य विधि चयनको साथ वाटरमार्क प्रबन्धकमा एक भन्दा बढी वाटरमार्क चयन गर्न सक्नुहुनेछ। एक वाटरमार्क चयन गर्न एक पटक क्लिक गर्नुहोस्। सिफ्ट क्लिक एक समूह मा एक लगातार चयन को लागी। विच्छेदित छनौटको लागि म्याकमा कमान्ड क्लिक गर्नुहोस् वा विन्डोजमा कन्ट्रोल क्लिक गर्नुहोस्।
एक वाटरमार्क बनाउनुहोस्
एउटा पाठ वाटरमार्क सिर्जना गरेर सुरू गर्नुहोस्। अन्य वाटरमार्क प्रकारहरू यस्तै फेसनमा सिर्जना गरिएको हो। तपाईंको पहिलो वाटरमार्क सिर्जना गर्न वाटरमार्क प्रबन्धक ड्रयर खोल्नुहोस् (भिडियो / एनिमेसन तल हेर्नुहोस्)।
'वाटरमार्क प्रबन्धक' को तल बायाँमा निलो + बटन क्लिक गर्नुहोस् (माथिको भिडियो / एक हेर्नुहोस्
छवि) ड्रयरको तल।
अर्को तरीका फाइल फाईल मेनूमा जान र नयाँ वाटरमार्क वा एन कमाण्ड छनौट गर्नु हो।
ड्रपडाउन मेनू देखा पर्दछ, नयाँ पाठ वाटरमार्क सिर्जना गर्न 'पाठ ...' चयन गर्नुहोस्।
तपाईं यो वाटरमार्क सम्पादक (तल) देख्नुहुनेछ जसले पाठ वाटरमार्कको लागि सेटिंग्स परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।
पाठ थप गर्नुहोस्। तपाईको इच्छा अनुसार फन्ट, आकार, रign्ग र प ,्क्तिबद्ध, आदि परिवर्तन गर्नुहोस्। वाटरमार्कलाई एक राम्रो पहिचान योग्य नाम दिनुहोस्, 'भयो' बटनमा थिच्नुहोस् र यो 'वाटरमार्क प्रबन्धक' मा बचत हुनेछ जहाँ तपाईं यसलाई कुनै पनि समयमा चयन गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं यसलाई फोटोमा वाटरमार्क गर्न प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
हाल, त्यहाँ १० वटरमार्क प्रकारहरू छन्। 10 दृश्यमान वाटरमार्क जुन वाटरमार्क हुन् जुन फोटोहरूमा देखिन्छ। पाठ, आर्कमा पाठ, पाठ ब्यानर, बिटमैप ग्राफिक, भेक्टर ग्राफिक, लाइन्स, क्यूआर-कोड र बोर्डर। प्लस २ अदृश्य वाग्टरमार्क प्रकारहरू, मेटाडाटा र स्टेगोमार्क। अरु आउँदैछन्।
तल हामी विस्तृत रूपमा प्रत्येक वाटरमार्क प्रकारका लागि सेटिंग्स छलफल गर्दछौं।
पाठ वाटरमार्कहरू सिर्जना गर्न सजिलो छ। कुनै पनि आकारमा टेक्स्ट छिटो हुन्छ र उपलब्ध फन्टहरूमा निर्भर गर्दछ। iWatermark + ले २ 292 २ सुन्दर फन्टहरू (धेरै गुगल फन्टहरू हुन्) लाई प्रणाली फन्टको साथ पहुँच दिन्छ।
माथिको स्क्रिनशटले तपाइँले सबै सेटि waterहरू देखाउँदछ जुन तपाइँले पाठ वाटरमार्क सिर्जना गर्दा देख्नुहुन्छ।
1) प्रकार- ड्रपडाउन मेनूलाई वाटरमार्क प्रकारहरू मध्ये एकमा सेट गर्नुहोस्।
२) नाम- तपाईं वॉटरमार्क को लागी नाम सेट गर्नुहोस्
)) सामग्री- पाठ वाटरमार्क को लागी सामग्री सेट गर्नुहोस्।
)) घुसाउनुहोस् - सामग्रीमा विशेष पात्रहरू घुसाउनुहोस् जस्तै © प्रतिलिपि अधिकारको लागि प्रतीक वा trade ट्रेडमार्क, आदि। साथै तपाई ट्यागहरू घुसाउन सक्नुहुन्छ जुन फोटोमा आईपीटीसी वा एक्सआईएफ जानकारीको लागि भ्यारीएबल हो। अधिक जानकारी यहाँ छ।
)) फन्ट- फन्ट सेट गर्नुहोस् र यसलाई सही फन्ट साइज गर्नुहोस्।
)) प्रभाव- नक्सा, एम्बोस, व्युत्क्रम, जस्तै प्रभाव सेट गर्दछ। प्रभावको दाँयामा, फन्टको रंग सेट गर्नुहोस्, पाठ ड्रपशाडो, र प्रकाशको दिशाले त्यो छाया सिर्जना गर्दछ।
)) पृष्ठभूमि रंग- पृष्ठभूमि र color र सीमा विवरण सेट गर्नुहोस्
)) पign्क्तिबद्ध- पाठ र प्याडि ofको प Al्क्तिबद्ध (बाँया, बीच, दायाँ) सेट गर्नुहोस् जसले पाठको वरिपरि थप प्याडि / / ठाउँ दिन्छ।
)) घुमाउने- पाठको परिक्रमण परिवर्तन गर्नुहोस्।
१०) अस्पष्टता- अस्पष्टता / पारदर्शिता सेट गर्नुहोस्।
११) स्केलि- यसले iWatermark अलग सेट गर्दछ किनभने यसले सम्बन्धित र निरपेक्ष स्केलिंगको विकल्प दिन्छ।
सापेक्ष (%) - पूर्वनिर्धारित सेटिंग्स, बुझ्ने र प्रयोग गर्न सजिलो। प्रायः जसो व्यक्तिले चाहेको जस्तै गर्दछ। सापेक्ष मोड स्थिति% बाट बाट सेट गरीएको छ। कुनै फोटोको आकार छैन तपाईंले दृश्यात्मक समान परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। वाटरमार्क आकार / स्थिति फोटो आयाम द्वारा प्रभावित छन्। फोटो पृष्ठमा यस सेटिले तपाईंलाई वाटरमार्कको सापेक्ष स्थिति सेट गर्न अनुमति दिन्छ (% द्वारा) ब्याचमा प्रत्येक फोटोको आकार र अभिविन्यासको पर्वाह नगरी। उदाहरण: २ फोटोको ब्याचमा, एउटा कम र अन्य उच्च रिजोलुसनमा, एक कम रिजोलुसनको तस्बिरमा करीव १० पिक्सेल चौडा हुनका लागि सीमा वाटरमार्क सेट गर्न सकिन्छ जब उच्च रिजोलुसन फोटोमा २० पिक्सेल चौडा नाप्न सकिन्छ। विगतमा हामीसँग केवल "सापेक्ष" मोड थियो, तर केही प्रयोगकर्ताहरूले "पूर्ण" एउटा अनुरोध गरे।
निरपेक्ष (पिक्सेल) - सेट सबै, स्थिति, फन्ट, बोर्डर, ग्राफिक्स र सबै पिक्सल मा काम गर्न परिवर्तन मा छ। "निरपेक्ष" मेट्रिक्स मोड तस्बिर आकारको स्वतन्त्र सबैका आकार / स्थिति गर्दछ। सबै फोटोहरूका लागि वाटरमार्क आकार र स्थिति समान रहनेछ (पिक्सेलमा)। उदाहरण: २ फोटोको ब्याचमा, एउटा कम र अन्य उच्च रिजोलुसनमा, १० वटा पिक्सेल चौडा सेट बोर्डर वाटरमार्क दुबै फोटोहरूमा ठ्याक्कै १० पिक्सेल चौडा हुनेछ।
सापेक्षिक प्रतिशत द्वारा वॉटरमार्क स्थान सेट गर्न को लागी हो। यो आवश्यक हुन्छ जब तपाईं एक वाटरमार्क एकै आकार र उही ठाउँमा तस्बिरको समूहमा देखिन चाहनुहुन्छ जुन सबै फरक-फरक रिजोल्युसनहरू, आकारहरू र अभिमुखिकरणहरू हुन सक्छन्।
स्क्रिनशटमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ स्केलिंग ड्रपडाउन मेनू पूर्वनिर्धारित रूपमा 'कुनै स्केलि' 'मा सेट गरिएको छ। यसको मतलब तपाईं% मा नभई पिक्सेलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ।
मापनका लागि सबै विकल्पहरू ड्रपडाउन मेनूमा 'कुनै स्केलि' ',' क्षैतिज स्केल गर्न: 'र' ठाडो मापन गर्न: 'मा देख्न सकिन्छ।
कुनै स्केलि। छैन - पिक्सेलमा काम गर्न स्केलि sets सेट गर्दछ।
तेर्सो मापन गर्न को लागी: -% मा तेर्सो मा काम गर्न मापन सेट गर्दछ।
ठाडो मापन गर्न: -% लाई ठाडो रूपमा कार्य गर्न मापन सेट गर्दछ।
१२) छवि ढाक्न टाइल - तस्विरमा पाठ धेरै पटक दोहोर्याउँदछ। यो ती व्यक्तिहरूका लागि महत्वपूर्ण छ जुन फोटोको कुनै अंश लिईएको छैन।
१)) पिन - तपाईंलाई वाटरमार्कको स्थान सेट गर्न अनुमति दिन्छ कि यो सबै तस्बिरहरूमा समान छ, तिनीहरूको रेजोल्युसन वा अभिमुखीकरण (पोर्ट्रेट वा ल्यान्डस्केप) फरक पर्दैन। पिनले स्थानलाई सामान्य तरीकाले शीर्ष, बायाँ वा तल, दायाँ, इत्यादिमा सेट गर्न अनुमति दिन्छ।
14) स्थान- एकचोटि तपाईंले पिनको साथ सामान्य स्थान सेट गर्नुभयो तपाईं राम्रो ट्युन गर्न सक्नुहुन्छ कि यो जस्तो। तल तपाईं 'अफसेट एक्स' र 'अफसेट वाई' देख्नुहुनेछ। कुन पिनमा तपाईंले X र Y परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर निर्भर गर्दै, X वा Y. X तेर्सो दिशा हो र Y ठाडो दिशा हो।
यदि तपाईं एक तस्बिरलाई वाटरमार्क गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ स्थानहरू सेट गर्ने सजिलो तरिकाहरू छन् तर यसको कारण यो पनि छ कि वाटरमार्कहरूलाई उही ठाउँमा देखा पर्न अनुमति दिनुहोस् चाहे तपाईं वाटरमार्क गर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न आकार र अभिमुखिकरणको एक वा एक हजार फोटोहरू।
टेक्स्ट वाटरमार्कमा सबै भन्दा बढि सेटिंग्स हुन्छ त्यसैले हामीले यसको साथ सुरु गर्‍यौं। निम्न प्रत्येक वाटरमार्क प्रकारका लागि हामी केवल टेक्स्ट वाटरमार्कमा समावेश नगरेका सेटि settingsहरूको विवरण मात्र थप्दछौं।
पाठ वाटरमार्कमा ट्यागहरू
ट्यागहरू अत्यन्त उपयोगी छन्। त्यो फोटो वा भिडियोबाट देखिने वाटरमार्कमा मेटाडाटा (जस्तै क्यामेरा मोडेल, सिर्जना मिति, अनुक्रम संख्या, फाईल नाम, स्थान, आदि) राख्न सबै टेक्स्ट वाटरमार्क सेटिंग्स (माथि देखाएको) मा 'घुसाउनुहोस् ट्याग (हरू') प्रयोग गर्नुहोस्। फोटो वा भिडियो। यी प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको आफ्नै अनुकूलित वाटरमार्क सिर्जना गर्न तपाईंको फोटोहरूमा विविध प्रकारका जानकारीहरू प्रदर्शन गर्न जुन त्यो फोटोमा मेटाडेटाको आधारमा फरक हुनेछ।
यो विभिन्न तरिकाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ एक उदाहरण छ।
पुरानो र युवा सर्फरहरू। Kauai। २००© ul जुलियन मिलर
उदाहरण १: मानौं कि तपाईं ११ of को ब्याचमा प्रत्येक फोटोमा सिरियल नम्बर जस्तो अनौंठो नम्बर राख्न चाहनुहुन्छ। माथिको मा स्क्रिनशट तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ कि कसरी र ट्यागहरू पाठ वाटरमार्कमा थपिन्छ र फोटोमा राखिन्छन्। अब ब्याचमा प्रत्येक फोटो संग एक अद्वितीय काउन्टर र कुल हुनेछ। यो तल फोटोमा जूमिएको माथिको फोटोको बाँया तलको कार्यमा देख्न सकिन्छ। यसले फोटोहरू प्रत्येक यस नम्बरमा ११ of ० को नम्बर सही नम्बर गरिएको देखाउँदछ। धेरै सजिलो!
यो छवि माथिको फोटोको अंशमा जूम गरिएको छ जुन प्रयोगमा नम्बर ट्याग देखाउँदछ।
उदाहरण २: ट्याग प्रयोग गरी १ वा १०० फोटोमा अक्षांश र देशान्तर थप्नुहोस्। पूर्वावलोकनको साथ वाटरमार्क बनाउँदा दायाँ तिर देखिन्छ।
उदाहरण:: मानौं तपाईं एक पत्रिका वा वेबसाइटको लागि क्यामेराको समीक्षा गर्नुहुन्छ र विशेष क्यामेराबाट फोटोहरू परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ। यो गर्नका लागि तपाईंले सयौं तस्विरहरूका लागि बिभिन्न प्रकारहरू देखाउन आवश्यक पर्दछ विभिन्न प्रकारका विभिन्न तरीकाले लिइएको। एक डरलाग्दो संगठनात्मक कार्य। iWatermark ट्यागले यो कार्य धेरै सजिलो बनाउँदछ किनकि अब तपाई क्यामेराको सेटिंग्सको चश्मा राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै खास क्षणमा कुनै फोटो लिइन्छ, प्रत्येक फोटोमा।
यस छविले ट्याग नाम र विशेष फोटोको GPS (अक्षांश र देशान्तर) प्रदर्शित ट्यागको साथ लेबलहरू देखाउँदछ।
आर्क वाटरमार्कमा पाठ
आर्क पाठ वाटरमार्कले घुमाउरो मार्गमा पाठको वाटरमार्क उत्पन्न गर्दछ।
दायाँ सबै टेक्स्ट आर्क सेटिंग्स छन्। यो सेटिंग्स टेक्स्ट वाटरमार्क र अधिक मा देखीएको छ। ती अतिरिक्त सेटि belowहरू तल वर्णन गरिएका छन्।
अटोसाइज रेडियस - स्वचालित रूपमा रेडियस सेट गर्दछ पाठ फिट गर्न आवश्यक हुन्छ त्यसैले समाप्त हुन्छ। यसले रेडियसलाई तल ओभरराइड गर्दछ।
त्रिज्या - चापको बाहिरी भागमा पाठ
पाठ A वा ∀ - पाठ दाँया माथि वा माथि तल रेन्डर गर्नुहोस्।
कोण - चापको वरिपरि पाठ घुमाउँदछ।
कोण - चापमा पाठको कोण परिवर्तन गर्नुहोस्। वा डट आइकनको साथ वृत्त घुमाउनुहोस्।
यहाँ उल्लेख नगरिएका अन्य सेटिंग्स माथिको पाठ वाटरमार्क सेटिंग्समा फेला पर्नेछ।
ब्यानर वाटरमार्कमा पाठ
ब्यानर एक समायोज्य पृष्ठभूमि को साथ पाठ हो।
माथी ब्यानर वाटरमार्कको लागि सेटिंग्स संवाद हो। तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा यो फोटोको कुनै पनि पक्षमा समायोज्य ब्यानर राख्दछ। सेटिंग्स धेरै परिचित छन्, ती मध्ये धेरै टेक्स्ट वाटरमार्क जस्ता छन्। केवल भिन्नता रेडियो बटन हो जसले ठाडो वा तेर्सो छनौट गर्न अनुमति दिन्छ।
बिटमैप / लोगो / ग्राफिक वाटरमार्क
ग्राफिक वाटरमार्क लोगो, कला, र हस्ताक्षर को लागी राम्रो हो। तपाईंको लोगो वा कुनै ग्राफिक प्रयोग गर्नुहोस् तर तिनीहरूलाई विशेष ग्राफिक ढाँचा हुन आवश्यक पर्दछ। पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ ।png भनिन्छ। नमूना हस्ताक्षर, प्रतीक र अन्य ग्राफिक्स हामी पारदर्शी पृष्ठभूमि छ र .png फाईलहरू हो। यसको मतलब यो छ कि ग्राफिक वर्ग भए पनि केवल हस्ताक्षर आफैंले देखाउँदछ र जुन हस्ताक्षर होइन पारदर्शी हुन्छ पृष्ठभूमि फोटो मार्फत देखाउनको लागि। यो गर्नको लागि फाइल ढाँचालाई पारदर्शितासँग .png भनिन्छ र यसले वाटरमार्कको पृष्ठभूमि पारदर्शी हुन अनुमति दिन्छ (ajpg ले यो पारदर्शितालाई अनुमति दिँदैन, .png प्रयोग गर्नुपर्दछ)।
बिटमैप ग्राफिक वाटरमार्क सेटिंग्स संवाद।
यो लोगो र अन्य ग्राफिक कलाको लागि हो।
१. वाटरमार्क सम्पादकमा 'नयाँ ग्राफिक थप्नुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं कुनै पनि ग्राफिक फाइल छनौट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको लोगो जस्तै वाटरमार्कको रूपमा कार्य गर्न। ग्राफिक्स उत्तम हुन्छन् जब तिनीहरू .png फाईलहरू पारदर्शिताका साथ गर्दछन् ताकि पृष्ठभूमि नदेखिने। हेर्नुहोस् सोधिने प्रश्न थप विवरणहरू लागि।
२. कुनै परिवर्तन गर्न उपकरणमा क्लिक गर्नुहोस् रोटेशन, पारदर्शिता, आदि। यसलाई नाम दिनुहोस् र बचत गर्नुहोस्।
Your. तपाईंको नयाँ वाटरमार्क ड्रपडाउन मेनूमा थपियो (माथि देखिएको)। फोटो वा वाटरमार्क गर्न यो वा कुनै अन्य छनौट गर्नुहोस्। प्रदर्शन गरिएको वाटरमार्क मेट्न - बटन प्रयोग गर्नुहोस्
हस्ताक्षरहरू - एक बिटमैप वाटरमार्क प्रयोग गरी तपाईंको हस्ताक्षर वाटरमार्कको रूपमा थप्दै।
तपाईंलाई तपाईंको हस्ताक्षरको .png फाईलको आवश्यकता छ। यो विभिन्न तरिकाहरूमा सिर्जना गर्न सकिन्छ।
सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको तपाईंको ग्राफिक डिजाइनरबाट यसको लागि सोध्नु हो।
आफै गर। पहिले, तपाईको नाम कालो पेन वा मार्कर सेतो कागजमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्।
अर्को, कागजमा तपाईंको हस्ताक्षरको स्न्यापशट लिनको लागि तपाईंको डेस्कटप प्रयोग गर्नुहोस् वा डेस्कटप स्क्यानर प्रयोग गर्नुहोस्।
फोटोशप प्रयोग गर्नुहोस् वा पूर्वावलोकन अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहोस् जुन सबै म्याकहरूमा आउँदछ।
लाइन्स वाटरमार्कहरू प्राय: स्टक फोटो कम्पनीहरूले प्रयोगमा देखा पर्दछ। लाइन्स वाटरमार्क कोर्दछ जुन कि तस्बिरको मध्यभागबाट बाहिर निस्कन्छ। मुख्य विचार भनेको यो हो कि मानिसहरूलाई फोटोहरू प्रतिलिपि गर्नबाट रोक्न यो एक शक्तिशाली विधि हो किनभने यसले फोटोहरूको धेरैजसो क्षेत्रहरू कभर गर्ने बित्तिकै ती लाइनहरू हराउनको लागि धेरै काम सिर्जना गर्दछ।
लाइन वाटरमार्क को लागी सेटिंग्स उदाहरण स्क्रीनशट मा देखाईन्छ। सेटिंग्स धेरै स्पष्ट छन्। तिनीहरू के गर्छन् भनेर हेर्न सबैलाई जाँच्न लायक छ। त्यो सेटिंग स्पष्ट छैन जुन अपरेसन हुन्छ जुन तपाईंले लाइन र on मा क्लिक गरेपछि फेला पर्दछ। डायलग माथिको स्क्रिनशटको तल्लो दायाँ तिर देखिएको छ। त्यो संवादको फेदमा अस्पष्टताको लागि ड्र्याग बार हुन्छ।
QR उदाहरण छवि तल हाम्रो वेबसाइट यूआरएल, https://plumamazing.com होल्ड गर्दछ। आईओएस मा दुबै क्यामेरा अनुप्रयोगहरू (आईओएस ११ मा) र शुद्ध एन्ड्रोइड क्यामेरा अनुप्रयोगले स्क्यान गर्न र QR कोडमा जानकारीमा कार्य गर्न सक्दछ। क्रोमले दुबै एन्ड्रोइड र आईओएसमा क्यूआर कोडहरू पढ्न सक्दछ। त्यहाँ अन्य धेरै QR स्क्यानर अनुप्रयोगहरू पनि छन्। तल क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र तपाईं हाम्रो साइटमा स्वचालित रूपमा जानको लागि विकल्प पाउनुहुनेछ। तपाइँ तपाइँको साइटको लागि वा कुनै पृष्ठमा तपाइँ प्रदर्शन गर्न चाहानु भएको कुनै जानकारीको साथ एक बनाउन सक्नुहुन्छ।
उपयोग उदाहरणहरू। QR हरू फोटो वा अन्य ग्राफिक्समा वाटरमार्कको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन तपाईंको साइट वा अन्य जानकारीमा तपाईंको सृजनात्मकतामा निर्भर गर्दछ मानिसहरूलाई तपाईंको नाममा लैजानको लागि नाम, ईमेल, यूआरएल समात्न सक्छ।
१. कसैको तस्बिरको गुच्छाका लागि क्यूआर वाटरमार्क हुन सक्छ र प्रत्येक क्यूआरले स्थान, शर्तहरू, मूल्य निर्धारण, आदिमा जानकारीको साथ यसको आफ्नै वेब पृष्ठमा नेतृत्व लिन सक्छ।
२. तपाईको तस्विरहरूलाई क्यूआरको साथमा वाटरमार्क गर्नुहोस् जसमा तपाईंको URL, ईमेल, प्रतिलिपि अधिकार, र अन्य जानकारी समावेश छ। फेसबुक, ट्विटर, र अन्य सामाजिक मिडिया को लागी एक तस्वीर संग तपाईंको सम्बन्ध कायम गर्न को लागी राम्रो छ। जब तपाईं सोशल मीडिया साइटहरूमा फोटो अपलोड गर्नुहुन्छ तिनीहरू प्राय मेटाडाटा हटाउँछन्। सामाजिक साइटहरूले दृश्य, वाटरमार्कहरू जस्तै पाठ, हस्ताक्षर, ग्राफिक्स वा QRs हटाउँदैन।
अर्को उपयोगी प्रकार बोर्डर वाटरमार्क हो। यसले SVG (सबै आकारहरूमा उत्तम रेन्डडिशन) कला प्रयोग गर्दछ पूरै फोटो वरपर किनाराहरू कोर्नका लागि र कुनाहरूमा स्क्रोलवर्क पनि।
मेटाडाटा फोटोको बारेमा जानकारीको बिभिन्न प्रकारको संख्या हो। मेटाडाटा वाटरमार्कहरू सिर्जना गर्न धेरै सरल छन्।
StegoMark iWatermark स्टेगनोग्राफिक वाटरमार्क हो। यो वाटरमार्क हो कि फोटोको रंग जानकारीमा जानकारी लुकाउँछ। एउटा र photo्ग तस्बिर वास्तवमा धेरै संख्यामा हुन्छ। नम्बरहरू जुन र color र स्थान वर्णन गर्दछ। संख्याको यो विशाल परिमाणमा, केहि थप संख्याहरू लुकाउन खाली ठाउँ छ। यही कुरा स्टेगोमार्कले तपाईको जानकारीलाई फोटो डेटामा इन्क्रिप्ट गर्नु र त्यहि डाटालाई अननक्रिप्ट गर्नु हो। StegoMark सिर्जना गरिएको थियो र iWatermark को लागी अनुपम छ।
कसैले तपाईंको तस्विरबाट देख्न सक्ने वटरमार्कहरू काट्न सक्छन् तर स्टिगोमार्क फोटोमा सम्मिलित रहन धेरै सम्भावना हुन्छ किनकि यो अदृश्य र jpg कम्प्रेसन, क्रोपिंग र दृश्य परिवर्तन हुने पानी चिन्ह भन्दा अन्य परिवर्तनहरूको लागि बढी लचिलो छ।
महत्वपूर्ण: एक पटकमा केवल १ स्टिगोमार्क प्रयोग गर्न सकिन्छ। जहाँ तपाई एकै ठाउँमा देखिने (टेक्स्ट, ग्राफिक, क्यूआर, आदि) वाटरमार्क एकैसाथ फोटो वाटरमार्क चयन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ फोटोहरूको संख्यामा कुनै सीमा छैन जुन एक पटकमा स्टेगोमार्कको साथ प्रशोधन हुन्छ।
महत्वपूर्ण: २ characters क्यारेक्टर वा कम (सिफारिस गरिएको) स्टिगोमार्कले पानीको मार्क गरिएको .JPG फोटो पुन: रिजाइज गर्ने / रिम्प्रप्रेस गर्दा यो सब भन्दा लचिलो हुन अनुमति दिन्छ। To० सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ तर यसले सन्देशको लचिलोपनालाई असर गर्दछ। याद गर्नुहोस् कि तपाइँ URL छोटो पार्न यूआरएल छोटो बनाउन को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
महत्वपूर्ण: StegoMark फोटोहरूमा उत्तम रूपमा प्रयोग गरिन्छ जुन: उच्च रिजोलुसन छविहरू। विभिन्न पैटर्न, र ,्ग, बनावट सहितको फोटोहरूले स्टिगोमार्कबाट थप जानकारी समात्न सक्छ।
उदाहरण १: स्पष्ट नीलो आकाशको एक विशाल विस्तारको साथ कम रिजोलुसन छविले कलाकृतिहरू देखाउँदछ। यस छवि बनाउने नम्बरहरू समान र धेरै सुव्यवस्थित छन्। त्यहाँ कम ईन्ट्रोपी छ र त्यसैले StegoMark जानकारीको लागि कम कोठा उपलब्ध छ।
उदाहरण २: ज forest्गल, रूखहरू, घाँसहरू वा आकाशको उच्च रिजोलुसन छविमा अधिक ईन्ट्रोपी छ (सबै नम्बरहरूको सर्तमा यसलाई बनाउँदै) र यसैले स्टेगोमार्क जानकारीको लागि बढि कोठा।
स्टेगोमार्क फोटोग्राफीका लागि स्ट्यागनोग्राफिक वाटरमार्कको पहिलो पटकको कार्यान्वयन हो र यो केवल iWatermark मा उपलब्ध छ। स्टेगनोग्राफीले वास्तविक डाटा छवि डेटामा अदृश्य रूपमा केही डाटा सम्मिलितको कुनै पनि प्रक्रियालाई बुझाउँदछ।
स्टीगोमार्क किनकि यसले स्टेगनोग्राफीलाई जोड्दछ, प्राय: स्टगोलाई छोटोको लागि भनिन्छ र मार्क शब्दबाट मार्क गर्दछ। StegoMarks प्लम आश्चर्यजनक मा डिजाइन एक विशेष एल्गोरिथ्म प्रयोग गर्दछ। यो विशेष ईनकोडि thatको डाटा iWatermark बिना व्याख्या गर्न असम्भव बनाउँछ। यदि त्यहाँ कुनै पासवर्ड छैन भने iWatermark को कुनै पनि प्रतिलिपि iWatermark द्वारा फोटोमा लुकेका लुकेको पाठ प्रकट गर्न सक्दछ। यदि त्यहाँ पासवर्ड छ भने पासवर्ड र iWatermark भएको व्यक्तिले मात्र लुकेको पाठ प्रकट गर्न सक्दछ।
एक तरीकाको स्टिगोमार्क तपाईंको ईमेल वा व्यवसाय URL लाई फोटोमा इम्बेड गर्नु हो। यो सँग एक मेटाडाटा र एक दृश्य वाटरमार्क तपाइँको पत्यारपत्र मा एक तस्वीर संग जोडिएको संरक्षण को विभिन्न परतहरु दिन्छ। प्रत्येक छुट्टै वाटरमार्क लेयर बिभिन्न तरिकाले चीजहरूको प्रतिकार गर्दछ जुन फोटोमा गर्न सकिन्छ जस्तै काँटछाँट, पुन: नामकरण, पुन: नामाकरण, आदि। तपाईंको स्वामित्व जानकारी कायम राख्न।
'वाटरमार्क प्रबन्धक' पृष्ठ खोल्न सुरू गर्न र निलो '+' प्रतिमा चयन गर्नुहोस् र तपाईं यो ड्रपडाउन मेनू देख्नुहुनेछ:
अन्तिम आईटमहरू स्टिगोमार्क चयन गर्नुहोस् ...
'नाम' को लागि यस स्टेगोमरको लागि राम्रो वर्णात्मक नाम राख्नुहोस्।
जब तपाईं इनपुटमा तस्विरहरूको एउटा समूहमा छोड्नुहुन्छ र स्टिगमार्क चयन गरिएको छ, हिट प्रक्रिया र एक संवादले पप अप गर्दछ पासवर्ड वा कुनै पासवर्डको लागि सोध्दैन।
'पाठ' मा पाठ छविमा इम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ।
IWatermark प्रो संग कुनै पनि पासवर्ड प्रयोग गरेर सन्देश पढ्न सक्दछ तर अरू कसैले पनि। अझ बढि गोपनीयताका लागि पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि केवल पासवर्ड र iWatermark प्रो को साथ कोहीले त्यो तस्वीर सन्देश पढ्न सक्दछ जुन फोटो फोटो डाटामा राखिएको थियो।
एक StegoMark प्रकट गर्न2तरिकाहरू
StegoMark पढ्नको लागि पहिलो र सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको फाइल मेनूमा जानुहोस्, 'StegoMark दर्शक' भनिने वस्तु छान्नुहोस्। तपाईंको फोटो तान्नुहोस् मा, वा चयन बटन प्रयोग गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ कुनै पासवर्ड छैन भने यसले तत्काल सामग्री प्रकट गर्दछ। यदि त्यहाँ पासवर्ड छ भने पासवर्ड टाइप गर्नुहोस् र 'लागू गर्नुहोस्' मा थिच्नुहोस्। यहाँ प्रकट गरिएको पाठले 'मार्क फ्लेमिंगद्वारा फोटो' भनेको छ।
दोस्रो स्टेगोमार्क पढ्नका लागि, निर्यात गरिएको स्टिगोमार्क वाटरमार्क फोटो खोल्नुहोस् iWatermark प्रोको इनपुट ट्रेमा ड्रप गरेर वा फाईल मेनूबाट खुला प्रयोग गरेर।
त्यसो भए इनपुट ट्रेको देब्रे छेउमा ट्याप गर्नुहोस् i यसको वरिपरि सर्कलमा ट्याप गर्नुहोस्। यसले जानकारी विन्डो खोल्दछ। तलको स्क्रीनशटमा देखिए अनुसार यस जानकारी विन्डोमा स्टिगोमार्क आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग एक छ भने।
मुख्य सेटिंग्स प्यानल
यो खण्डमा हामी प्रत्येक ट्याबको माध्यमबाट मुख्य विन्डोको शीर्षमा जान्छौं र अधिक विवरणहरू प्रदान गर्दछौं।
माथिको उपकरणपट्टीमा प्रत्येक ट्याब क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ जुन विशेष प्रकारका कार्यहरू गर्दछ।
IWatermark प्रो मा मुख्य विन्डो। ठाउँ जहाँ तपाईं आफ्नो वाटरमार्किंग गर्नुहुनेछ।
इनपुट - जहाँ तपाइँ चयन गर्नुहुन्छ इनपुटका लागि फोटोहरू। यस क्षेत्रमा क्लिक गर्नुहोस् फाईल वा फोल्डर चयन गर्न वा केवल फाइलमा वा ड्र्याग गर्नुहोस् फाइलहरू प्रक्रिया गर्नको लागि। इनपुट क्षेत्रले कुन प्रकारका फाइलहरू (JPEG, PNG, RAW, आदि) मा तानेको आइकनहरू प्रदर्शन गर्दछ र जब एक फोल्डर (हरू) पनि प्रदर्शित गर्दछ।
चयन गरिएका फाइलहरू / फोल्डरहरू हटाउन X क्लिक गर्नुहोस्।
फाईलहरूको स्थान हेर्न म्याग्निफाइ glass ग्लास क्लिक गर्नुहोस्।
जानकारी / पूर्वावलोकन विन्डो प्राप्त गर्न 'i' क्लिक गर्नुहोस्। पूर्वावलोकन क्लिक गर्दा पनि त्यस्तै गर्दछ।
प्रशोधन- वाटरमार्किंग, रिसाइजिंग, पुन: नामाकरण इत्यादिका लागि सेटिंग्सको यस क्षेत्रको सिंहावलोकन। यहाँ तपाईं ड्रपडाउन मेनूबाट कुन वाटरमार्क प्रयोग गर्ने छिटो सेट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं पुन: आकार दिन, थम्बनेलहरू, EXIF ​​/ IPTC / XMP खोल्न सक्नुहुन्छ, र तपाईं आउटपुट ढाँचा र गुण सेट गर्न सक्नुहुनेछ (यदि जेपीईजी)।
आउटपुट - क्लिक गर्नुहोस् वा चयन गर्नुहोस् वा फोल्डरमा ड्र्याग गर्नुहोस् जहाँ तपाईंको नयाँ प्रक्रिया गरिएको फाइलहरू जान्छन्।
वाटरमार्क प्रबन्धक- दायाँमा विन्डो। यो जहाँ तपाईं एक वा अधिक वाटरमार्क एक फोटो वा फोटो वाटरमार्क प्रयोग गर्न को लागी चयन गर्नुहोस्।
तपाईं आउटपुट फोल्डरको संरचना सेट गर्न सक्नुहुनेछ। पोर्ट्रेट / ल्यान्डस्केप उप-फोल्डरहरूमा फोल्डर संरचना परिवर्तन गर्दा तपाईंको सबै इनपुट फोटोहरू दुई पट्टिमा विभाजित गरिन्छ एउटा पोर्ट्रेट र अन्य ल्यान्डस्केप अभिमुखिकरण फोटोहरू समावेश गर्दछ।
'प्रक्रिया' बटनको बाँया पट्टि पूर्वावलोकन बटन हो जुन यस्तो देखिन्छ।
यस पूर्वावलोकन विन्डोले चयनित फोटोमा वाटरमार्कले हेर्ने तरिकाको विचार दिन्छ। यहाँबाट सोशल मिडियामा सिधा साझेदारी गर्न पनि सम्भव छ। फेसबुक, ईमेल, सन्देश ट्विटर, र अन्य सामाजिक मिडियामा पूर्वावलोकन गरिएको एकल छवि साझा गर्न माथिको दायाँ बटनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईले म्याक ओएस प्रणाली प्राथमिकताहरूमा छनौट गर्नुपर्नेछ। अधिक क्लिक गर्नुहोस् ... अधिक उपलब्ध सामाजिक मिडिया खोल्नको लागि।
a वाटरमार्क प्रबन्धक
वाटरमार्क प्रबन्धक आईवाटरमार्कमा अद्वितीय छ। यहाँ छ जहाँ वाटरमार्क हुन सक्छ:
राखिएको र पूर्वावलोकन गरियो।
छविलाई वाटरमार्क गर्न चयन गरियो।
सम्पादन गर्न डबल क्लिक गरियो।
तल दायाँ तिर फिल्ड प्रयोग गरेर पुन: नामाकरण गरियो।
शीर्ष दायाँमा खोजी क्षेत्र प्रयोग गर्नका लागि खोजी गरियो।
लक गरिएको / अनलक गरिएको जुन तिनीहरू सुरक्षित छन् जब लक गरिएको तपाईं तिनीहरूलाई सम्पादन वा मेटाउन सक्नुहुन्न।
इम्बेड IPTC / XMP
ईमेल वा सोशल मिडिया मार्फत निर्यात र साझेदारी गरिएको।
वाटरमार्क प्रबन्धक विन्डो (यो तल दायाँ तिर छ)
सिर्जना- नयाँ वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्। + क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले सिर्जना गर्न सक्नुहुने यी असंख्य वाटरमार्क प्रकारहरू हेर्नुहोस् (तलको स्क्रीनशट)।
मेटाउन- एक वा अधिक वाटरमार्क तिनीहरूलाई मेटाउन को लागी चयन गर्नुहोस्।
सम्पादन गर्नुहोस् - वाटरमार्क चयन गर्नुहोस् र यो बटन क्लिक गर्नुहोस् वा वाटरमार्क सम्पादकमा सम्पादन गर्न डबल क्लिक गर्नुहोस्।
मा क्लिक गर्नुहोस् विकल्प मेनू यस गियर प्रतिमा अन्तर्गत
र यो मेनु हेर्नुहोस्:
पूर्वावलोकन - चयनित फोटो र वाटरमार्क प्रयोग गरी पूर्वावलोकन दिन्छ।
सम्पादन गर्नुहोस् - वाटरमार्क चयन गर्नुहोस् र सम्पादन क्लिक गर्नुहोस् वा सम्पादन गर्न वाटरमार्कमा दुई पटक क्लिक गर्नुहोस्।
नक्कल र सम्पादन गर्नुहोस् अघिल्लो काममा आधारित नयाँ नामको साथ नयाँ वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्।
मर्ज गर्नुहोस्- २ वा बढी वाटरमार्कहरू एकमा जोड्दछ।
सेयर गर्नुहोस् -आईडब्ल्यू * क्लाउड, एयरड्रोप, ईमेल, सन्देशहरू र / वा ड्रपबक्स मार्फत वाटरमार्कहरू।
निर्यात- यसलाई वा अझ सजिलो प्रयोग गर्नुहोस् वा साझेदारी गर्न वा ब्याकअपको लागि डेस्कटपमा वाटरमार्क तान्नुहोस्। निर्यात गरिएको वाटरमार्कसँग यो प्रतिमा छ:
आयात गर्नुहोस्- यो कमाण्ड प्रयोग गर्नुहोस् वा माथिको प्रतिमाको साथ निर्यात गरिएको वाटरमार्कमा तान्नुहोस्, तिनीहरूलाई वाटरमार्क प्रबन्धकमा राख्नका लागि।
लक - वाटरमार्क लक / अनलक गर्न सानो लकमा क्लिक गर्नुहोस्। लक गर्दै यसले पढ्ने-मात्र बनाउँदछ र सम्पादनयोग्य वा deletable होईन।
अनलक - वाटरमार्क लक / अनलक गर्न सानो लकमा क्लिक गर्नुहोस्। लक गर्दै यसले मात्र पढ्ने बनाउँदछ र सम्पादन योग्य वा deletable होईन।
इम्बेड वा वाटरमार्कबाट IPTC / XMP हटाउनुहोस्- इम्बेड गर्नुहोस् वा जानकारी वा आईटीटीसी / एक्सएमपी क्षेत्रमा वाटरमार्कमा हटाउनुहोस्। त्यसोभए जब यो वाटरमार्क कुनै पनि अन्य गतिविधिहरू प्रयोगको साथ प्रयोग गरिन्छ भने त्यसले त्यो मेटाडेटा पनि इम्बेड गर्दछ।
मिति / समय ढाँचा- वाटरमार्क प्रबन्धकमा प्रदर्शित मिति / समय ढाँचा परिवर्तन गर्नुहोस्।
स्तम्भ दृश्य- वाटरमार्क प्रबन्धकमा विभिन्न स्तम्भ आईटमहरू देखाउँदछ र लुकाउँदछ।
b. वाटरमार्क सम्पादक
नयाँ वाटरमार्क सिर्जना गर्न फाइल मेनूमा नयाँ वाटरमार्क क्लिक गर्नुहोस् वा + बटन क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं यो देख्नुहुनेछ।
माथिका कुनै पनि वस्तुमा क्लिक गर्दा त्यो वाटरमार्क प्रकार सिर्जना गर्न वाटरमार्क सम्पादक खोल्नेछ। प्रत्येक वाटरमार्क प्रकारका लागि बिभिन्न सम्पादक छन्। यहाँ टेक्स्ट वाटरमार्क सम्पादक जस्तो देखिन्छ:
सामान्य - यसको मतलब कुनै प्रभाव छैन।
उल्टोया त पृष्ठभूमि छवि नमूना र colorबाट स्रोत छवि नमूना र color घटाउँछ, वा उल्टो, कुन नमूनाको अधिक चमक मानमा निर्भर गर्दछ। स्रोत छवि नमूना मान जुन कालो हो कुनै परिवर्तन हुँदैन; सेतो पृष्ठभूमि रंग मान inverts।
ईन्टवर्स एक उपयोगी छ जुन प्रयोग गर्न सकिन्छ किनकि यसले चर टोन पृष्ठभूमिका साथ छविहरूमा राम्रो पाठ पनि राख्दछ। उल्टोको साथ जति बढी सेता प्रयोग गरियो राम्रो। यो पाठ र ग्राफिक्स को लागी सही हो। कालोले केहि गर्दैन। ईन्वर्स मोडको लागि कि त पाठ वा ग्राफिक्समा सेतो प्रयोग गर्नु उत्तम हो।
एम्बोस र ईन्ग्रेभ
टेक्स्ट वाटरमार्क सेटिंग्सबाट टेक्स्टमा कोरिएका प्रभाव प्रयोग गर्दै
टेक्स्ट वाटरमार्क सेटिंग्सबाट पाठमा पृष्ठभूमिको साथ कुँदिएका प्रभाव प्रयोग गर्दै
टेक्स्ट वाटरमार्क सेटिंग्सबाट पाठमा एम्बोस गरिएको प्रभाव प्रयोग गर्दै
एम्बोस पृष्ठभूमि र ईन्ग्रेभ पृष्ठभूमि अर्ध पारदर्शी तलको फोटो देखाउँदै छन्। एम्बोस र ईन्ग्रेभले एम्बोसिंग भर्न पाठको रंग प्रयोग गर्दछ। दुबै सूक्ष्म वाटरमार्किंगका लागि उपयोगी छन्।
हालसालै तपाईसँग एउटा दुई ड्रप छायाको नियन्त्रण हुन्छ केवल एम्बास / ईra्ग्रेभ प्रभावमा।
बाहिर छाया रंग नियन्त्रण गरिएको छ। भित्रको छायालाई एम्बोसको लागि कालोमा निश्चित गरिएको छ र कुँदिएकोको लागि सेतो।
नोट: हाल केवल टेक्स्ट वाटरमार्कमा काम गर्दछ - ब्यानर वा आर्क पाठ वा ग्राफिकमा होईन।
कालो छाया - वास्तवमा तपाईले के सोच्नुहुन्छ।
सेतो छाया - ditto
रूपरेखा - पाठ रूपरेखा।
केहि प्रकारका फाईलहरू प्रशोधन गर्नका लागि फिल्टर सेट गर्नुहोस्।
फिल्टरिंग यहाँ वा मुख्य पृष्ठमा खोल्न सकिन्छ। यदि तपाईं इनपुटमा फोल्डर ड्रप गर्नुहुन्छ भने सबै प्रकारका विभिन्न ढाँचाका तस्बिरहरू छन् तर तपाईं मात्र .jpg फाइलहरू वॉटरमार्क गर्न चाहनुहुन्छ भने फिल्टरि youले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। विशेषताहरू, किवर्डहरू र / वा मेटाडाटामा इनपुट फाइलहरू फिल्टर गर्नुहोस्।
3. पुनःआकार गर्दै
प्रसंस्कृत फोटोहरूको आकार र नमूना परिवर्तन गर्नुहोस्।
रिसाइज गर्नुहोस् वा मुख्य पृष्ठमा रिसाइज वा वाटरमार्क र रिसाइज गर्न पुनः सुरु गर्नुहोस्। रिसाइजिंगले मूल लिन्छ र एक विशेष आकारको प्रतिलिपि उत्पादन गर्दछ। यसले चौडाई र उचाई भित्र रिसाइज पढ्दछ र यसको मतलब यो कि ती आयामहरू भित्र फोटो पुनःआकार गर्दछ। तपाईं ह्यान्डि प्रीसेटहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन साइजमा पुन: आकार दिनका लागि आकारहरू प्रयोग गरिन्छ।
नमूना रिजोलुसन परिवर्तन गर्न प्रयोग गरीन्छ। यसको मतलब के हो? यहाँ राम्रो छ व्याख्या.
4. पुन: नामाकरण
सबै प्रशोधित फोटोहरूको नाम बदल्नुहोस्।
यहाँ वा मुख्य पृष्ठमा पुन: नामकरण गर्नुहोस्। पुन: नामकरणले इनपुट फाईलहरूको प्रतिलिपि बनाउँदछ र तिनीहरूको पुन: नामकरण गर्दछ जुन तपाईंले निर्णय गर्नुभयो माथिको आफ्नो छनोटमा आधारित छ। तपाईं फाईल (हरू) को नाममा थप्न चाहानु भएको ट्याग चयन गर्नुहोस् वा तपाईंको आफ्नै उपसर्ग / प्रत्ययमा टाइप गर्नुहोस्। ट्यागहरू भ्यारीएबल हुन् जुन फोटोमा त्यस जानकारीको लागि खडा हुन्छन्। मोडेलले नयाँ फाइलको नाममा क्यामेराको मोडेल राख्नेछ। काउन्टर प्रत्येक फोटो प्रसंस्करण को लागी १ द्वारा वृद्धि होगी।
TIP: मा समय र मिति ढाँचा सेट गर्नुहोस् म्याकप्रणाली प्राथमिकतामा भाषा र क्षेत्रहरूमा जानुहोस् र उन्नत बटनमा हिट गर्नुहोस्। विन्डोजमा स्टार्ट मेनू क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि नियन्त्रण प्यानल क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि मिति वा समय क्लिक गर्नुहोस्।
सल्लाह: विभिन्न ट्यागहरू भित्र / बाहिर तान्नुहोस् (मिति, समय, क्यामेरा, मोडेल, आदि) र फाइल नाम कस्तो देखिनेछ भनेर स्वाद लिन पूर्वावलोकनमा हेर्नुहोस्।
Out. आउटपुट सेटिंग्स
यहाँ तपाईं फाईल ढाँचा, गुण र JPEG प्रगतिशील परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै निर्यात सेटिंग्स यहाँ पनि उपलब्ध छन्।
छवि ढाँचा: jpeg, TIFF, Photoshop PSD, PNG, BMP र JPEG 2000 बाट आउटपुट स्वरूप परिवर्तन गर्नुहोस्।
फाईल विस्तार:यो परिवर्तन नगर्नुहोस् तपाईले के गरिरहनु भएको छ भन्ने बारे थाहा छैन र यसको खास कारण छ। केही व्यक्तिले यो क्षमताको लागि सोधे तर यसको मतलब भनेको प्रतिमामा डबल क्लिक गर्दा त्यस विस्तारमा निर्भर अनुप्रयोगहरू खोल्दैनन्।
गुणस्तर: क्वालिटी स्लाइडर परिवर्तन गर्नुको मतलब यो हो कि तपाईंले JPEG कम्प्रेसन परिवर्तन गर्नुभयो। यो १०० बाट जान सक्दछ जसको मतलब गुणस्तर उस्तै उस्तै वा हानिविहीन छ। दुर्भाग्यवस, १०० लाई सेट गर्दा फाईल आकार बढ्छ, यो सबै अनुप्रयोगहरूमा सत्य हो। हामी 100 सेटिंग्स को सिफारिश गर्दछौं जो पूर्वनिर्धारित छ। 100 ले मूल फाइल भन्दा ठुलो गुण र अलि सानो आकार दिन्छ। गुणको बारेमा थप विवरण यस अनलाइन लेखमा वर्णन गरिएको छ:
यसमा अर्को उत्कृष्ट लेख:
दुबैले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ किन हामी सिफारिस गर्दछौं। 85 तर यसलाई तपाईंको इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्नको लागि छोड्नुहोस्।
लोअरकेस विस्तार: विस्तार लोअरकेस बनाउँछ। यसलाई अफ गर्नुहोस् जुन यससँग केस राखिन्छ।
JPEG प्रोग्रेसिभ प्रयोग गर्नुहोस् (सिफारिस गरिएको): यो सिफारिस गरिएको छ। प्रगतिशील JPEGs (p-JPEGs) सामान्यतया आधारभूत JPEGs भन्दा थोरै सानो हुन्छन्, तर तिनीहरूको मुख्य फाइदा भनेको ती चरणहरूमा देखा पर्दछ, छवि फिडिंगको प्रभाव दिँदै, इन्टरलेस गरिएको GIF मा जस्तै, माथिबाट चित्रकलाको विपरीत।
प्रसंस्कृत फोटोहरूको थम्बनेलहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
यहाँ थम्बनेलहरू खोल्नुहोस् वा मुख्य पृष्ठमा प्रत्येक प्रक्रिया गरिएको फाइलको लागि केहि आयामहरूको थम्बनेल प्राप्त गर्न। थम्बनेलहरू अन्य फोटोहरूका साथ आउटपुट फोल्डरमा सिधै प्रशोधन गरिन्छ तर एक्स्टेन्शन थम्बको साथ तिनीहरूलाई नियमित तस्बिरहरूबाट भिन्न पार्न।
यदि तपाइँ आउटपुट फोल्डरमा नयाँ फोल्डरमा सबै नयाँ थम्बनेलहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने "थम्बनेलहरूका लागि छुट्टै फोल्डर प्रयोग गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस्।
सबै माथिको EXIF, IPTC, र XMP मेटाडाटाका प्रकारहरू हुन्। iWatermark metadata को साथ3चीज गर्न सक्दछ।
१. यसले फोटो वा फोटोहरूबाट मेटाडाटा थप्न र हटाउन सक्दछ।
२. यसले वाटरमार्कबाट मेटाडाटा थप्न र हटाउन सक्छ।
Met. मेटाडेटा दृश्यमान वाटरमार्कमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।
पहिले हामी पोइन्ट १ को बारेमा कुरा गर्नेछौं।
१. फोटो वा फोटोहरूबाट मेटाडाटा थप्दै र हटाउँदै।
iWatermark प्रो मेटा ट्याग जानकारी को संरक्षण, हटाउन र इम्बेड गर्न सक्दछ। साथै यो मेटाटाग जानकारी वाटरमार्क फोटोहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अधिक जानकारी EXIF, IPTC, र XMP मा यहाँ।
अवस्थित मेटाडाटा संरक्षण गर्नुहोस् - पूर्वनिर्धारित द्वारा सकृय गरियो। यसले प्रतिलिपि गरिएको फाईलमा सबै मेटाटाग जानकारीलाई मूल फाइलमा डुप्लिकेट गर्दछ।
सक्षम आईपीटीसी / एक्सएमपी मेटाडाटा थप्नुहोस् - जब यो सबै जाँच गरिएको मेटाटैगहरू चयन गरिन्छ (प्रयोगकर्ता अनुकूलित) माथिको संवादमा मूल फाइलको प्रतिलिपिमा थपिएका छन्।
ड्रप-डाउन मेनू जसले आधारभूत, व्यावसायिक र कर्पोरेट भन्छ यसले तपाईंलाई मेटाट्यागहरूको संख्या चयन गर्न अनुमति दिन्छ तपाईं सम्पादन गर्न र प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईंले जाँच गर्नुभएका सबै आईटमहरू फाईलमा अवस्थित जानकारी अधिलेखन हुनेछ।
TIP: TIFF अन्तर्गत 'iWatermark Pro' सफ्टवेयर अन्तर्गत थपिएको छ (तल हेर्नुहोस्)।
यदि तपाईं सबै वाटरमार्क गरिएका छविहरूका लागि मेटाडाटा प्रयोग गरेर खोजी गर्न आवश्यक छ भने यसले काम गर्दछ।
2। वाटरमार्कबाट मेटाडाटा थप्ने र हटाउने।
वाटरमार्कमा मेटाडाटा थप्नको उपयोगिता यो हो कि प्रत्येक पटक तपाईले फोटो वाटरमार्क गर्दा यसले एकै समयमा मेटाडाटाको एक विशेष सेट थप गर्दछ।
iWatermark मात्र प्रोग्राम हो जुन हामीलाई थाहा छ कि यसले यो गर्न सक्दछ। किन यो उपयोगी छ? एक फोटोग्राफरको रूपमा तपाईसँग एक वाटरमार्क हुन सक्छ जसले तपाईंको लोगोको साथ फोटोको शीर्षमा दृश्यमान वाटरमार्क राख्दछ र साथसाथै तपाईंले आफ्नो प्रतिलिपि अधिकार, तपाईंको कम्पनीको नाम, यूआरएल, ईमेल र / वा तपाईंलाई चाहानु भएको कुनै अन्य पाठ डाटा जस्तो मेटाइएको मेटाडाटा थप्नुहुन्छ।
कसरी वाटरमार्कमा मेटाडेटा इम्बेड गर्ने।
पहिले, वाटरमार्क चयन गर्नुहोस्।
अर्को, EXIF ​​/ IPTC / XMP प्यानलमा जानुहोस् र डाटा मार्क गर्नुहोस् जुन तपाईं वाटरमार्कमा इम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ।
त्यसपछि वाटरमार्क प्रबन्धकमा र सेटिंग्स ड्रपडाउन मेनू चयन गर्नुहोस् र इम्बेड वस्तु छान्नुहोस्।
यो जानकारी वाटरमार्क प्रबन्धकमा IPTC / XMP को लागि स्तम्भमा देखा पर्नेछ र यस्तो देखिन्छ।
Met. मेटाडेटा दृश्यमान वाटरमार्कमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। यसलाई ट्याग भनिन्छ।
यसको लागि नयाँ टेक्स्ट वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस् EXIF, IPTC र XMP मेटाडाटा भ्यारीएबलहरू क्यामेरा मोडेलको लागि टेक्स्टको रूपमा वाटरमार्कको लागि छनौट गर्नुहोस् जुन प्रक्रियामा जब जानकारीलाई फोटोमा दृश्यमान वाटरमार्कको रूपमा प्रदर्शन गर्दछ। वाटरमार्क बनाउँदा यस मेनुबाट ट्याग जानकारी चयन गर्नुहोस्।
सामान्यतया परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन कि सेटिंग।
स्वत: खुला प्रगति- सुरू प्रक्रिया हिट भएपछि स्वत: प्रगति सम्वाद खुल्छ।
स्वत: बन्द प्रगतिप्रक्रिया पछि - यदि यो जाँच गरियो भने प्रगति डायलग स्वत: बन्द हुन्छ।
प्रशोधन विन्डो विस्तार गर्नुहोस्- जब मुख्य ट्याबको प्रसंस्करण क्षेत्रमा सधै खुला हुन्छ।
लाइब्रेरी फाईलहरू फाइन्डर लाइब्रेरीमा खोल्नुहोस् जहाँ उदाहरणहरू र तपाईंको स्टक वाटरमार्क ग्राफिक्स थप्न सकिन्छ।
सेटिंग्स र वाटरमार्क - पुरानो iWatermark (प्रो छैन) बाट प्रिफ्स आयात गर्न यो बटन क्लिक गर्नुहोस्।
लाइब्रेरी फाईलहरू देखाउनुहोस् - यो तपाईले सिर्जना गर्नु भएका फाइलहरूको स्थान हो।
प्राथमिकता फाइल देखाउनुहोस् - लाई खोजकर्ता खोल्छ स्थान प्राथमिकता फाइल र यो हाइलाइट।
ब्याकअप फाईलहरू देखाउनुहोस्- हामी त्यहाँ एक अर्को प्रतिलिपि छ सुनिश्चित गर्न तपाईंको मूल को प्रतिलिपि बनाउन। यस बटनले ती फोल्डरलाई फाइन्डरमा खोल्दछ।
सबै पूर्वनिर्धारितहरू रिसेट गर्नुहोस् - पुनःसेट गर्नुहोस् सक्कली पूर्वनिर्धारित सेटिंग्स को लागी अनुप्रयोग। यो प्रयोग गर्नका लागि धेरै उपयोगी छ यदि तपाईंले कुनै समस्या सामना गर्नुभयो भने।
सम्पादक पृष्ठभूमि रंग - यो सम्पादकको पृष्ठभूमि रंग हो। यो शीर्ष दायाँ कुनामा सम्पादकको ड्रप-डाउनबाट पनि सेट गर्न सकिन्छ।
मुख्य ट्याबमा प्रसंस्करण कार्यहरू विस्तार गर्नुहोस् - यो जाँच गरिसकेपछि यसले प्रत्येक चोटि iWatermark खोल्ने बनाउँदछ यसले मध्यम सेक्शन (प्रसंस्करण कार्यहरू) विस्तारसँगै मुख्य ट्याबमा खोल्नेछ।
JPEG प्रोग्रेसिभ प्रयोग गर्नुहोस् - आधारभूत जेपीईजी प्रयोग गर्न अनचेक गर्नुहोस्। यो परिवर्तन नगर्नुहोस् जब सम्म तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा हुँदैन।
इम्बेडेड प्रोफाइल बिना छविहरूका लागि - तपाईंलाई म्याक वा विन्डोजमा आउने वा निकन, क्यानन वा अन्य सफ्टवेयरबाट लोड गरिएका विभिन्न प्रोफाइलहरू छनौट गर्न दिन्छ। आईसीसी र color प्रोफाइल को बारेमा अधिक यहाँ.
ईतिहास फाइल बनाउनुहोस्- मात्र आवश्यक छ यदि हामी तपाईंलाई यो प्राविधिक समर्थनको लागि चालु गर्न भनौं वा तपाईं सबै अपरेशनहरूको लग चाहानुहुन्छ।
ईतिहास फाइल देखाउनुहोस् - यसले लग फाइल देखाउँदछ।
पुरानो iWatermark आयात गर्नुहोस् - पुरानो iWatermark वाटरमार्क आयात गर्दछ। प्रत्येक चोटि बटन थिचे पछि यसले सबै पुरानो वाटरमार्कहरू आयात गर्दछ त्यसैले यसलाई एक पटक मात्र हिट गर्न सक्दछन् जबसम्म तपाईं सबै पुरानो वाटरमार्कको नक्कल लिन चाहानुहुन्छ।
लगिङ- मात्र आवश्यक छ हाम्रो टेक समर्थन द्वारा अनुरोध गर्दा। यो जानकारीले हाम्रो प्रोग्रामरलाई मद्दत गर्दछ।
ड्रपबक्स ब्याटरमार्क ब्याकअप र साझेदारी गर्न प्रयोग गरिन्छ।
ड्रपबक्स प्रतिमा - ड्रपबक्स साइटमा जानको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र नि: शुल्क २ जीबी अनलाइन भण्डारण क्षेत्र सिर्जना गर्नुहोस्।
ड्रपबक्स अपलोड- तपाईसँग एक पटक ड्रपबक्स खाता भए पछि अपलोड गर्न यो बटन क्लिक गर्नुहोस्। तपाइँको वाटरमार्कहरू अनलाइन ब्याकअप गर्न राम्रो छ। यसले तपाईंलाई अन्य कम्प्युटरहरूसँग तपाईंको वाटरमार्कहरू र सेटि syहरू सिंक गर्न अनुमति दिन्छ।
ड्रपबक्स डाउनलोड - तपाईंको वाटरमार्कहरू र सेटिंग्स ड्रपबक्सबाट तपाईंको कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्नुहोस्।
ड्रपबक्स हटाउनुहोस्- ड्रपबक्समा तपाईंको वाटरमार्क र सेटिंग्स हटाउँछ।
फोटो नोटरी- यो एक सेवा थियो जुन हामीले वाटरमार्कको जगेडा गर्न सिर्जना गर्थ्यौं। यो क्लाउड सेवा थियो। यो अब उपलब्ध छैन। यसलाई प्रतिस्थापन गर्न हामी प्रयोगकर्ताहरूलाई वाटरमार्क निर्यात गर्न र आफ्नै क्लाउड सेवाहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छौं।
यो ट्याब तपाईंको पंजीकरण जानकारी प्रविष्ट गर्न यो ठाउँ हो यदि तपाईं हामीबाट iWatermark प्रो खरीद गर्नुभयो र एप्पल अनुप्रयोग स्टोरलाई होइन। यहाँ जहाँ तपाइँले दर्ता जानकारी राख्नुहुन्छ हामी स्वचालित रूपमा पठाउँदा तपाइँ iWatermark प्रो खरीद गर्नुभयो। एक पटक तपाईले जानकारी प्रविष्ट गर्नुभयो र लागू बटनमा थिच्नुहोस् तपाईले एउटा संवाद पाउनुहुनेछ जुन तपाईलाई अब दर्ता गरिएको छ।
आईवटरमार्क प्रो म्याकको साथ एप्पलको फोटोको अनुप्रयोग प्रयोग गर्दै
फोटोका iWatermark प्रो संग स्ट्यान्डअलोन अनुप्रयोगको रूपमा काम गर्दछ। iWatermark चाँडै नै प्लगइनको रूपमा फोटोहरू भित्र काम गर्दछ।
विन्डोज एक्सप्लोररबाट वाटरमार्क लागू गर्दै
विन्डोज संस्करणको २.०.१ को विमोचन भएदेखि, तपाईं विन्डोज अन्वेषक भित्रबाट वाटरमार्क लागू गर्न सक्नुहुनेछ। यस सुविधालाई शेल विस्तार भनिन्छ। छवि फाइलमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् (JPEG, PNG, TIFF, BMP, PS) त्यसपछि 'iWatermark Pro संग वाटरमार्क' चयन गर्नुहोस् र श्रेणीबद्ध मेनुमा, सूचीबद्ध वाटरमार्क मध्ये एक।
छवि अब वाटरमार्क गरिएको छ। छिटो र सरल।
नोट: फाइल ढाँचा उस्तै रहन्छ तर तपाईं अनुप्रयोगको मुख्य प्यानलबाट छवि गुणवत्ता नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ। शेल विस्तारको सीमितता:
१. एक पटकमा एक वाटरमार्क प्रयोग गर्न सकिन्छ।
२. थम्बनेल उत्पन्न हुने छैन।
The. यदि छवि फाइल अर्को अनुप्रयोग द्वारा लक गरिएको छ भने यसले काम गर्दैन।
A. केवल पढ्नका लागि फाईल वॉटरमार्क गरीनेछ तर त्यसपछि यसलाई पढ्न-मात्र मिल्दैन तर लेख्न सकिने छैन।
अपडेटहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्
तपाईंलाई iWatermark प्रो को नयाँ संस्करण जाँच गर्न अनुमति दिँदछ। हामी सँधै नयाँ संस्करणको सिफारिस गर्दछौं किनकि हामी बग फिक्स गर्न र नयाँ सुविधाहरू जोड्नमा व्यस्त छौं।
IWatermark को आईफोन / आईप्याड र एन्ड्रोइड संस्करणहरूमा प्रयोग गरिएको सबै फन्टहरू स्थापना गर्न स्थापनाकर्ता प्रयोग गर्नुहोस् र धेरै Google फन्टहरू पनि। बिभिन्न कम्प्युटरहरूमा फरक फन्टहरू भएको र फरक ओएसको मतलब छ कि निर्यात गरिएको वाटरमार्कहरू साझा गर्न सकिन्छ र समान देख्न सकिन्छ। यी अतिरिक्त फन्टहरूले वाटरमार्क अनुकूलतामा मद्दत गर्दछ किनकि हामी अब म्याक, विन्डोज र चाँडै आईओवाटरमार्कका आईओएस र एन्ड्रोइड संस्करणहरू बीच वाटरमार्किंग साझेदारी गर्ने प्रस्ताव गर्दछौं। तिनीहरू पनि वाटरमार्कमा प्रयोग गर्न फन्टहरूको एक उत्कृष्ट संग्रह हो।
फन्ट र प्लगइन स्थापनाकर्ता हो यहाँ। प्लगइनहरू अब सिफारिश गरीदैनन् तर म्यास OS को पुरानो संस्करणहरूमा एपर्चर र iPhoto प्रयोग जारी राख्न चाहने व्यक्तिको लागि स्थापनाकर्ता हुन्।
यदि तपाईंसँग फोल्डरमा धेरै निर्यात गरिएको वाटरमार्क फाईलहरू छन् भने तपाईं एउटामा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र द्रुत लुक हटकी कमाण्ड स्पेसलाई हिट गर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्कमा जानकारीको साथ माथिको संवाद देखाउन।
नयाँ वाटरमार्क- सम्पादकमा नयाँ वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्। + बटन थिच्ने जस्तै गर्दछ।
वाटरमार्क सम्पादन गर्नुहोस्- मुख्य प्यानलमा सम्पादन बटन थिच्ने जस्तै कार्य गर्दछ।
वाटरमार्क बचत गर्नुहोस् - वाटरमार्क सम्पादकमा सेव बटन थिच्ने जस्तै कार्य गर्दछ।
मिडिया ब्राउज गर्नुहोस्- वैकल्पिक र नि: शुल्क आईएमडिया ब्राउजर (म्याक मात्र) डाउनलोड गर्दछ जुन तपाईंलाई सजिलैसँग विभिन्न स्थानहरूबाट फोटोहरू खिच्न अनुमति दिन्छ। एक पटक यसको डाउनलोड भए पछि यो तुरून्त कार्य गर्दछ फोटोको चयनलाई अनुमति दिन।
ब्याकअप फोल्डर देखाउनुहोस् - मूल इनपुट फाइलहरूको लागि ब्याकअप फोल्डरको फाइन्डरमा स्थान प्रदर्शन गर्दछ।
वाटरमार्क निर्यात गर्नुहोस् - तलको प्रतिमाको साथ हालको वाटरमार्क फाइल निर्यात गर्दछ।
निर्यात गरिएको वाटरमार्कले टेक्स्ट र ग्राफिक्स समावेश गर्दछ तर फन्टहरू समावेश गर्दैन। तपाईले अर्को कम्प्युटरमा पनि यो iWatermark प्रो आयात गर्न सक्नुहुनेछ। अरूसँग तपाईंको वाटरमार्क साझा गर्न को लागी धेरै उपयोगी।
वाटरमार्क आयात गर्नुहोस् - ती निर्यात गरिएका वाटरमार्क फाईलहरू आयात गर्दछ।
फोल्डर सेट गर्नुहोस्- यसले इनपुट / आउटपुट / थम्बनेलको समान सेटिंग गर्दछ जुन तपाईं मुख्य प्यानलमा गर्न सक्नुहुन्छ।
सेटिङ-वस्तु ह्यान्डलहरू देखाउनुहोस्-
अर्को इनपुट फोटो -
अघिल्लो इनपुट फोटो -
अर्को वाटरमार्क वस्तु -
अघिल्लो वाटरमार्क वस्तु -
घटाउनु- मेनु र एप्पल संसाधनहरू मार्फत खोजी गर्नुहोस्। म्यानुअल खोजी गर्दैन।
जूम - तपाईं अहिले नै अनलाइन म्यानुअल खोल्नुहुन्छ 🙂
आउटपुट प्रगति देखाउनुहोस् - यदि तपाईंसँग सुझाव / बगहरू छन् भने तपाईं यहाँ रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी हेर्छौं फोटो जानकारी - को लागी जानकारी संवाद खोल्छ
सबैलाई अगाडि ल्याउनुहोस् - सबै आईवटरमार्क प्रो विन्डोजहरू अगाडि ल्याइन्छन्।
Windows - iWatermark प्रो को खुला विन्डोजहरू प्रदर्शन गर्दछ।
खोज- मेनु र एप्पल संसाधनहरू मार्फत खोजी गर्नुहोस्। म्यानुअल खोजी गर्दैन।
iWatermark प्रो मद्दत - तपाईं अहिले नै अनलाइन म्यानुअल खोल्नुहुन्छ 🙂
प्रतिक्रिया पठाउन- यदि तपाईंसँग सुझाव / बगहरू छन् भने तपाईं यहाँ रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यी हेर्छौं तर प्रतिक्रिया दिन सक्दैनौं।
Q: मलाई समस्या छ।
A: जे भए पनि समस्या जे भए पनि यी चरणहरूको पालना गर्नुहोस्:
FIRST: उन्नत ट्याबमा जानुहोस् र 'सबै पूर्वनिर्धारितहरू रिसेट गर्नुहोस्' बटनमा थिच्नुहोस्। यसले सामान्यतया समस्याको ख्याल राख्दछ जुन यो हो कि मानिसहरू बिभिन्न बिभिन्न सेटिंग्समा परिवर्तन गरे। फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
दोस्रो: प्रोग्राम खोल्नुहोस् र iWatermark प्रो मेनू अन्तर्गत मेनू वस्तुको बारे मा चयन गर्नुहोस् कि तपाइँ कुन संस्करण चलाइरहनु भएको छ र त्यो भर्खरको हो भनेर। तपाइँको अनुप्रयोग फोल्डरमा iWatermark प्रो छ र तपाइँको पुरानो iWatermark छैन भनेर निश्चित गर्नुहोस्। सबै पुरानो संस्करणहरू मेटाउनुहोस्। यदि आवश्यक छ भने हाम्रो साइटबाट iWatermark प्रो को पछिल्लो संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्।
थर्ड: निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं दर्ता हुनुहुन्छ। माथि हेर।
चौथो: सरल सुरु गर्नुहोस्। एक साधारण वाटरमार्क प्रयास गर्नुहोस्। इनपुट ट्रेमा एउटा फोटो र आउटपुट ट्रेमा खाली फोल्डर तान्नुहोस्। ड्रप-डाउन मेनूमा हाम्रो डेमो वाटरमार्कहरू मध्ये एक छान्नुहोस्। हिट प्रक्रिया पछाडि फोटो वाटरमार्क गरिएको जाँच गर्न आउटपुट फोल्डर जाँच गर्दछ।
यदि तपाईं अझै समस्या छ भने हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् र हामीलाई यो जानकारी पठाउनुहोस्:
१. यदि तपाईं माथिको प्रक्रिया अनुसरण गर्नुभयो भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्।
२. तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको फोटो हामीलाई पठाउनुहोस्। साथै, निर्यात गर्नुहोस् र तपाईंले प्रयोग गरिरहनुभएको वाटरमार्क पठाउनुहोस्।
I. आईवटरमार्कमा समस्या उत्पन्न गरेपछि हामीलाई कन्सोल लग पठाउनुहोस्। यो गर्न खोल्न कन्सोल लग उन्नत ट्याबमा बटन हिट गर्दछ कि 'खोल्नुहोस् कन्सोल लग'। कन्सोल लग खाली गर्नुहोस् र iWatermark फेरि चलाउनुहोस् समस्याको लागि त्यसपछि कन्सोल लगमा नतिजा जानकारी प्रतिलिपि गर्नुहोस् र हामीलाई ईमेल गर्नुहोस्।
Q: म कसरी मेरो पुरानो iWatermark वाटरमार्क आयात गर्न सक्छु?
A: उन्नत ट्याबमा जानुहोस् र आयात बटनमा थिच्नुहोस्। मात्र यसलाई एक पटक हिट गर्नुहोस् वा तपाईं डुप्लिकेटहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
Q: म कसरी वाटरमार्कको नाम बदल्न?
A: वाटरमार्क प्रबन्धकमा, यसलाई परिवर्तन गर्न वाटरमार्क नाममा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं वाटरमार्क चयन गर्न र यसलाई सम्पादकमा खोल्न सक्नुहुन्छ। तल दायाँपट्टि नाम परिवर्तन गर्नुहोस् र बचत मा थिच्नुहोस्।
Q: तपाईको उदाहरण वाटरमार्क धेरै राम्रो छ म कसरी तिनीहरुलाई सम्पादन गर्न सक्छु?
A: तिनीहरूलाई मात्र चयन गर्नुहोस् र सम्पादन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अन्तमा शब्द प्रतिलिपिको थपको साथ समान शीर्षकको साथ यसले नयाँ सिर्जना गर्दछ। केहि तथ्यमा सावधान हुनुहोस् कि केहिमा सेतो पाठ हुन सक्छ जुन सेतो पृष्ठभूमिमा स्पष्ट नहुन सक्छ। यसलाई चयन गर्न केवल पाठमा केवल ड्र्याग गर्नुहोस् र यसलाई तपाईंलाई मनपर्दो परिवर्तन गर्नुहोस्। प्राय: हाम्रो डेमो वाटरमार्कमा, हामी ट्याग प्रयोग गर्दछौं जुन ठेगाना पुस्तिकाबाट मुख्य सम्पर्क (सामान्यतया तपाईं) लाई तान्दछ।
Q: के म फोटोमा एक पटकमा एक भन्दा बढी वाटरमार्क थप्न सक्छु?
A: हो, मात्र प्रक्रिया बटन थिच्नु भन्दा पहिले वाटरमार्क प्रबन्धकमा वाटरमार्क चयन गर्नुहोस्।
Q: म कसरी मेरो वास्तविक हस्ताक्षरको साथ एक हस्ताक्षर वाटरमार्क सिर्जना गर्ने?
A: म्याकमा तपाईं यी निर्देशनहरू पालना गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि त्यो सिग्नेचरको प्रतिलिपि गर्नुहोस्। कुनै नयाँ ग्राफिक वाटरमार्कमा तपाईंलाई कुनै पनि समयमा आवश्यक परेको बेला प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
Q: म कसरी पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ एक वाटरमार्क सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंले डेमो हस्ताक्षरहरू समावेश गर्नुभयो?
A: यो धेरै सरल र कुनै पनि मध्यवर्ती ग्राफिक्स प्रो थाहा छ तर कसरी सबैले यो गर्न सक्छन्। यहाँ केही ट्यूटोरियलहरू छन्, 1 ट्यूटोरियल र2ट्यूटोरियल.
Q: मलाई दर्ता गर्नमा समस्या भइरहेको छ। मैले के गर्नुपर्छ?
A: यदि तपाइँलाई दर्ता गर्न कुनै समस्या भएमा यी चरणहरूको अनुसरण गर्नुहोस्:
२. जाँच गर्नुहोस् म्याक or Windows हाम्रो साइटमा अनुप्रयोग पृष्ठ तपाईको नयाँ संस्करण छ भनेर निश्चित गर्न र तपाइँको अनुप्रयोग फोल्डरमा यो निश्चित गर्नुहोस्।
२. सबै पुराना संस्करणहरू मेटाउनुहोस्।
The. लाइसेन्स कुञ्जी प्रयोग गरेर अनुप्रयोग दर्ता गर्दै। निश्चित गर्नुहोस् ईमेलमा निर्देशनहरू अनुसरण गर्नुहोस् जुन तपाईं अनुप्रयोग खरीद गरेर पठाउनु भएको थियो।
You. यदि तपाइँले एक संवाद पाउनुभयो जुन तपाइँले 'दर्ता गरिएको छैन' भनेर भन्‍नुभयो भने हामीले पठाएको पंजीकरण ईमेलबाट तपाइँको दर्ता डेटा प्रतिलिपि गरेर टाँस्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।
Reg. आवेदन दर्ता गर्नुहोस् बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईले यो देख्नुपर्दछ (तल)। अन्यथा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंको केहि प्रश्न छ भने।
Q: त्यहाँ वाटरमार्कको साथ पूर्ण आकारका फोटोहरू र आउटपुट थम्बनेलहरू तर कुनै वाटरमार्कको साथ आउटपुट गर्ने तरिका छ?
A: हो, प्रयोग गरेर AppleScript.यस लि manual्कमा ट्याप गर्नुहोस् यो पुस्तिकाको एप्पल स्क्रिप्ट अध्यायमा जानको लागि र माथिको प्रश्नको उत्तर जान्नुहोस्। AppleScript तपाईको साथी हो जब तपाई स्वतन्त्र र iWatermark प्रो प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ उपन्यास तरीकामा।
Q: वास्तविक फोटो फोटोग्राफरहरूका लागि फोटोमा वाटरमार्क गर्न गम्भीर तरीका Digimarc छैन?
A: धेरै हजारौं गम्भीर पेशेवर फोटोग्राफरहरू iWatermark प्रयोग गर्छन्। हामीले आई-वाटरमार्कको विकासको कारण यो हो कि हामीलाई हाम्रो फोटोहरू वाटरमार्किंगको आवश्यकता थियो (हामीमध्ये धेरै फोटोग्राफरहरू हौं) र हामी सजिलो, सस्तो र प्रभावकारी ढ worked्गले काम गरेको केहि चाहान्छौं। हामीले Digimarc र अन्य धेरै विधिहरू अनुसन्धान गर्‍यौं जुन छविमा वाटरमार्क इम्बेड गर्दछ। हामीले Digimarc एक वर्ष सयौं डलर खर्च गर्न पाए (र ती छविहरु को संख्या मा आधारित चार्ज) र Digimarc प्रविधी मूर्ख छैन वा वास्तवमै व्यावहारिक छैन। यदि तपाईंले केही डाटा अदृश्य फेसनमा इम्बेड गर्नुहुन्छ जस्तै Digimarc तब व्यक्तिहरूले यसलाई देख्दैनन्। त्यहाँ सफ्टवेयर छ कि दृश्यमान वाटरमार्किंग गर्दछ, जस्तै iWatermark, र सफ्टवेयर जसले लुकाएको वाटरमार्किंग गर्दछ, जस्तै Digimarc। भन्नुहोस् तपाईसँग आईफोन छ र तपाईले पार्कमा हराउनुहुन्छ, तपाई यसलाई फिर्ता लिने सम्भावना धेरै हुन्छ यदि यो तपाईको नाम र फोन (iWatermark) को साथ कुँदिएको छ भने यदि केहि जानकारी लुकेको छ / यसको फ्ल्यास ड्राइभमा गुप्तिकरण गरिएको छ भने (Digimarc)।
यी तथ्यहरूलाई विचार गर्दै हामीले सुरुबाट नै निर्णय गर्‍यौं कि iWatermark सीधा, सस्तो, प्रयोग दृश्य र लुकेको वाटरमार्किंग हुनुपर्दछ। हामीले निर्णय गरेको सबैभन्दा प्रभावकारी दृष्टिकोण भनेको सफ्टवेयर बनाउनु थियो जसले सयौं छविहरू ब्याच गर्न सक्थ्यो र सुन्दर वाटरमार्क (लोगो, हस्ताक्षर, प्रतिलिपि अधिकार, जे भए पनि) राख्न सक्थ्यो। यसले व्यक्तिलाई सूचित गर्दछ ठीक अगाडि र बाहिर तपाईंको स्वामित्वको खुलामा।
के तिनीहरूले यसलाई हटाउन सक्छन्? हो, तर Digimarc को कुरा पनि त्यस्तै हो। जब तपाईं jpg मा छवि बचत गर्नुहुन्छ यो पुन: संकुचित हुन्छ (jpg कम्प्रेस्ड ढाँचा हो) पिक्सलहरू सबैको चारै तिर फिर्ता हुन्छ र एम्बेडेड Digimarc जानकारी गुमाउँदा पुन: व्यवस्थित हुन्छ। दुर्भाग्यवस हामी अझै डिजिटल युगमा प्रारम्भिक छौं र बौद्धिक सम्पत्ति प्रतिलिपि अधिकार सही छैन। यो संगीतकार, चलचित्र निर्माता, फोटोग्राफर र सफ्टवेयर विकासकर्ताहरूको लागि समस्या हो। मैले भर्खर यस विषयमा गुगल चलाएँ र फोटोग्राफरले यो चाखलाग्दो लि link्क भेट्टाए जुन केसलाई राम्रोसँग बताउँदछ।
Digimarc सोच्नु जस्तै हो जुन तपाईं यसको भूमि अन्तर्गत कुनै गुनासो चिन्ह गाडेर आफ्नो भूमि रक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। कोहीले पनि यसलाई देख्दैनन् र उनीहरूले यसको सार्वजनिक भूमि सोच्दछन् र तिनीहरू आफूले चाहेको कुरा गर्न सक्छन्। धेरै प्रभावकारी छैन। वास्तविकता के हो भने यसलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट पार्नु भनेको केही सम्पत्ति तपाईंको हो अझै पनि सुरक्षाको पहिलो उत्तम साधन हो र पहिलो रक्षा। यसैले हामीले iWatermark सिर्जना गरेका छौं। आईवटरमार्क भनेको सजिलैसँग देखिने वाटरमार्किंग लुकेको वाटरमार्किंग प्रयोग गर्न सचेत विकल्प थियो। हामी पनि एक विधि प्रदान गर्न चाहन्थ्यौं जुन प्रयोग गर्न सजिलो, व्यावहारिक र सस्तो हो जुन प्रत्येकले प्रयोग गर्न सक्दछ र बुझ्दछ।
अन्तमा, जब iWatermark रक्षा को तपाइँको पहिलो लाइन (डिजिटल अधिकार प्रबंधन को लागी) बन्न को लागी कुनै कारण छैन किन कि तपाइँ Digimarc जस्ता अन्य विधिहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
Q: मैले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टम्ब्लर, इत्यादिमा राखेका तस्विरहरूलाई किन वाटरमार्क गर्नुपर्दछ?
A: उत्कृष्ट प्रश्न! किनकि ती सबै सेवाहरूले तपाईंको मेटाडाटा हटाउँदछन् र तपाईंसँग त्यो फोटो बाँध्न केही पनि छैन। व्यक्तिहरू केवल तपाईंको तस्विरहरू उनीहरूको डेस्कटपमा तान्न र अन्यमा साझेदारी गर्न सक्दछन जबसम्म तपाईंसँग कुनै सम्पर्क हुँदैन र फाइलमा कुनै जानकारी छैन जुन तपाईंले भन्नुभएको हो कि तपाईं सिर्जना गर्नुभयो वा स्वामित्व पाउनुभयो। वाटरमार्कले सुनिश्चित गर्दछ कि सबैजना तथ्यमा स्पष्ट छन् कि फोटो तपाईको आईपी हो (बौद्धिक सम्पत्ती)। तपाईले कहिले थाहा पाउनु भएन कि तपाईले लिनु भएको फोटो कहिले भाईरल हुन्छ।
Q: IWatermark को आईओएस संस्करणमा तपाईंसँग भएका फन्टहरू म कसरी प्रयोग गर्ने?
A: अब, सजिलो तरीका भनेको आईफोटो र एपर्चर प्लगइनहरूको स्थापनाकर्तामा जानुहोस् र ती प्लगइनहरू र फन्टहरू एकै समयमा स्थापना गर्नु हो।
साथै, यी आईओएस प्रणाली संस्करणहरूमा आईओएस,, आईओएस and र आईओएस available मा उपलब्ध फन्टहरू हुन्:
Q: मैले एक साथीबाट वाटरमार्क पाएँ। जब मैले यसलाई आयात गरेँ, यो तिनीहरूको जस्तो देखिएन?
A: हामीले अरू कम्प्युटरहरूमा वाटरमार्कहरू निर्यात गर्न र साझेदारी गर्न सक्दछौं भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हामीले कडा परिश्रम गर्यौं र यस्तै देखिन्छ तर भिन्नता यी कारकहरूका कारण हुन सक्छ:
१. बिभिन्न अपरेटिंग प्रणालीहरूले ग्राफिक्स, र ,्ग, डिस्प्ले, इत्यादसँग थोरै फरक गर्दछ।
२. बिभिन्न फन्टहरू। यदि तपाईंसँग उस्तै सटीक फन्ट छैन भने उनीहरूसँग त्यसो भएमा त्यहाँ भिन्नता देखिन्छ। यो उही फन्ट हुन सक्छ तर भिन्न संस्करण।
१. तपाइँको साथीलाई सहि फन्ट पठाउन पाउनुहोस्।
२. नि: शुल्क खोज्नुहोस् वा उही फन्ट अनलाइन किन्नुहोस्।
Sure. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले फन्ट र प्लगइन स्थापनाकर्ता डाउनलोड गर्नुभयो, फन्टहरू त्यसबाट स्थापना गर्नुभयो किनकि त्यो आईओएस र एन्ड्रोइडमा प्रयोग हुने धेरै फन्टहरू छन्।
Q: जब म मेरो वाटरमार्क पाठ 90 ० वा २270० डिग्री घुमाउँछु, यो धेरै, धेरै सानो हुन्छ। यो चौडाई / उचाई-प्रतिशतको रूपमा घुमाउने कोण अनुसरण गर्दैन।
A: यो स्केलिंगका लागि छनौट गरिएको विधिको परिणाम हो। जब तपाईं वाटरमार्क सम्पादकमा वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस् पूर्वनिर्धारित रूपमा यो तेर्सोमा सेट हुन्छ। यदि तपाईं क्षैतिज वा ठाडो छनौट गर्नुहुन्छ यसले चारैतिर उफ्रने काम गर्दछ, सानो र ठूलो हुँदै गइरहेको छ, तर यदि तपाईं अनसकल्ड छनौट गर्नुहुन्छ भने यसले सामान्य व्यवहार गर्दछ। अनस्केल्ड, क्षैतिज र ठाडो स्केलिंग प्रयोगको ट्रेडअफलाई बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। ती ट्रेड अफहरू र किन iWatermark कार्य गर्दछ यो गर्दछ वर्णन गरिएको छ यहाँ.
Q: जब म वाटरमार्क भित्र ट्याग प्रयोग गर्छु म कुनै वाटरमार्क देखीरहेको छैन?
A: तपाईंसँग तस्बिरहरू हुनु पर्छ कि ती ट्यागमा इम्बेड गरिएको छ वा फोटोमा केहि पनि देखिने छैन। अर्को तरिकाले काम गर्दछ कि ट्यागलाई पुशिंग गर्नु जुन तपाईंले iWatermark को EXIF ​​/ IPTC / XMP क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो।
Q: म iWatermark को साथ मेरो फोटो ब्राउजर कसरी प्रयोग गर्ने?
A: आईफोटो, एपर्चर, लाइटरूम, ज़ी, आईडिया, एसीडीसी, आईभ्यू, पिकासा, क्यु पिक्ट र अन्य छवि ब्राउजरहरू सबै iWatermark Pro को साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तस्विर वा फोटो वा फोल्डर iWatermark प्रो मा चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि सामान्य जस्तै वाटरमार्क।
Q: के iWatermark प्रो एपर्चर, आईफोटो, लाइटरूम र अन्य फोटो ब्राउजरहरूमा काम गर्दछ?
A: हो यसले गर्छ। यी सबै अनुप्रयोगहरू र अन्यहरूका लागि, iMedia ब्राउजरले फोटो ब्राउजर, आईफोटो वा एपर्चरको लाइब्रेरीबाट आई-वाटरमार्क प्रोमा ड्र्याग र ड्रपको लागि द्रुत पहुँचको अनुमति दिन्छ। मात्र iMedia ब्राउजर डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्। त्यसपछि iWatermark प्रो फाइल मेनू प्रयोग iMedia ब्राउजर पहुँच गर्न।
Q: iWatermark प्रो iWatermark भन्दा धेरै छिटो छ तर मैले हजारौं फोटोहरू प्रक्रिया गर्नु पर्छ। तपाईंसँग गति अप्टिमाइजेसनको लागि केहि सुझावहरू छन्?
A: यदि खुला छ भने जानकारी विन्डो बन्द गर्नुहोस्। यदि खुला छ भने पूर्वावलोकन फलक बन्द गर्नुहोस्। एक ड्राइवमा इनपुट र अर्कोमा आउटपुट। अधिक र छिटो प्रोसेसर, अधिक मेमोरी र छिटो ड्राइभहरू जस्तै फ्ल्यास ड्राइभहरू वा RAID ड्राइभहरू सबै मद्दत गर्दछ।
Q: त्यहाँ विन्डोज को लागी एक iWatermark प्रो छ?
A: हो, त्यहाँ विन्डोजको लागि iiWatermark प्रो छ। म्याकका लागि पनि त्यहाँ छ। IOS र एन्ड्रोइड को लागी एक iWatermark + छ।
Q: वाटरमार्कहरू विन्डोजमा निम्न स्थानमा राखिन्छन्
A: यो वाटरमार्क डाटा को लागी मार्ग हो:
C: \_ प्रयोगकर्ताहरू \_ UserProfileName \_ AppData \_ रोमि\_ \_ iWatermark प्रो \_ वाटरमार्क
Q: सबै प्राथमिकता फाइलहरू कहाँ राखिएको छ?
A: तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन सजिलो तरीका भनेको मुख्य विन्डोमा उन्नत ट्याबमा ट्याप गर्नु हो भने लाइब्रेरी बटन iWatermark प्रोबाट बचत गरिएका सबै सेटि seeहरू हेर्नको लागि।
वा यहाँ जानुहोस्:
सी: \_ प्रयोगकर्ताहरू \_ [प्रयोगकर्ता] \_ AppData \_ रोमि\_ \_ iWatermark प्रो \_
- पुस्तकालय देखाउनुहोस् यो फोल्डर देखाउनुहोस्:
यसले समावेश गर्दछ:
'ब्याकअप देखाउनुहोस्' बटन ट्याप गर्दै तपाईंलाई यहाँ लैजान्छ:
सी: \_ प्रयोगकर्ताहरू \_ [प्रयोगकर्ता] \_ AppData \_ स्थानीय \_ iWatermark प्रो \_
यस फोल्डरले ब्याकअप फाइलहरू समावेश गर्दछ -
लग फाइलहरू - कन्सोल लग बटन देखाउनुहोस् यो फोल्डर खोल्नुहोस्।
Q: किन वाटरमार्क गरिएको फोटोमा मूल फोटोका वस्तुहरू भन्दा फरक रंग छन्?
A: यो र Color प्रोफाइलको साथ एक मुद्दाको कारण हुन सक्छ। रंग प्रोफाइलहरू धेरै जटिल छन्। म्याकमा, रंग प्रोफाईलहरू सामान्यतया एक मुद्दा हुन्छन् जबसम्म तपाईं मोनिटरमा तपाईंले जे देख्नुहुन्छ त्यसलाई प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्न जुन तपाईं प्रिन्ट गर्नुहुन्छ। विन्डोजमा, मुद्दा धेरै पटक देखा पर्न सक्छ।
लाइटरूम बन्द गर्नुहोस्।
स्टार्ट मेनू> कन्ट्रोल प्यानल> रंग व्यवस्थापनमा जानुहोस्।
उपकरण ट्याब क्लिक गर्नुहोस् यदि यो पहिले नै चयन गरिएको छैन।
उपकरण पप-अपबाट, तपाईंको मोनिटर चयन गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग १ भन्दा बढी मोनिटर जडान गरिएको छ भने, पहिचान मोनिटरहरूको बटन थिच्नाले पहिचानका लागि पर्दामा ठूलो संख्यामा प्रदर्शन गर्दछ।
'यस उपकरणका लागि मेरो सेटिंग्स प्रयोग गर्नुहोस्' चेकबक्स जाँच गर्नुहोस्।
हालै चयनित प्रोफाइलको नोट बनाउनुहोस्, जुन (पूर्वनिर्धारित) को रूपमा चिनो लगाइएको छ। यदि अवस्थित प्रोफाइल छैन भने, तपाईं यो चरण छोड्न सक्नुहुन्छ।
थप्नुहोस् बटन क्लिक गर्नुहोस्।
एसोसिएट रंग र Profile्ग संवादमा, sRGB IE61966-2.1 (sRGB कलर स्पेस प्रोफाइल.आईसीएम) चयन गर्नुहोस् र ठीक थिच्नुहोस्।
रंग व्यवस्थापन संवादमा फिर्ता, sRGB प्रोफाइल चयन गर्नुहोस् र पूर्वनिर्धारित प्रोफाइलको रूपमा सेट क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि संवाद बन्द गर्नुहोस्।
प्रणाली प्राथमिकता> प्रदर्शन मा जानुहोस्।
र। ट्याब चयन गर्नुहोस्।
क्यालिब्रेट बटन थिच्नुहोस् र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
विशेषज्ञ विकल्पहरू खोल्नुहोस् र गामामा क्यालिब्रेट गर्नुहोस्
यहाँ र Color प्रोफाइलमा अधिक जानकारी छ।
एडोब अन्त प्रयोगकर्ता लिंक:
Q: यदि सीएमवाईके छवि प्रक्रिया ब्याचमा छ, के यसले रंग मोडलाई आरजीबीमा परिवर्तन गर्दछ?
A: हो यो हुनेछ, iWatermark हाल केवल RGB सँग मात्र डिल गर्दछ, त्यसैले यसले CMYK छवि खोल्छ, तर यसलाई प्रक्रियामा बदल्छ।
Q: कुन वा RAW फाइल ढाँचा iWatermark प्रो पढ्छ?
A: एप्पलले म्याक ओएसमा अपडेट गर्न जारी गर्दछ विभिन्न RAW ढाँचाहरूलाई अझ राम्रोसँग समर्थन गर्न, म्याक ओएस अद्यावधिक हुँदा iWatermark यी अपग्रेडको तत्काल फाइदा लिन्छ। अधिक जानकारी यस एप्पल टेक नोटमा छ: http://support.apple.com/kb/HT4757
विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूले माइक्रोसफ्टको क्यामेरा कोडेक प्याक लिन र यसलाई स्थापना गर्न सक्दछन्।
Q: के म फाईलमा वाटरमार्क गर्न केहि मेटाडाटा प्रयोग गर्न सक्छु?
A: हो, हामी यसलाई प्रयास गर्न सिफारिस गर्दछौं किनकि यो एकदम उपयोगी हुन सक्छ। जानुहोस् 'एक पाठ वाटरमार्क' ड्रप डाउन मेनू छनौट 'मेटाडाटा' छनौट गर्नुहोस् EXIF, IPTC वा अन्य विकल्पहरू मध्ये कुनै एकबाट र यसले पाठ भ्यारीएबलमा ड्रप गर्दछ जुन सही डाटा घुसाउँदछ।
Q: XMP के हो? आईपीटीसी भनेको के हो? EXIF के हो?
A: हेर्नुहोस् शब्दावली खण्ड.
Q: म २ कम्प्युटरमा iWatermark प्रयोग गर्न सक्दछु?
A: हो, यदि तपाईं मात्र प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ। यदि तपाईं र अरू कसैले दुबै मेशिनहरूमा iWatermark प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने लाइसेन्सको लागि अर्को प्रतिलिपि किन्न आवश्यक छ।
Q: कती ठूलो फाईल आईवटरमार्क प्रो वाटरमार्क गर्न सक्छ?
A: हामी TIFF, JPEG, आदिको साथ काम गर्नको लागि एप्पलको एपीआई (उनीहरूको कोड) प्रयोग गर्छौं। कुन आकार सम्भव छ फाइल प्रकारमा निर्भर गर्दछ। अधिकतम आकार पनि मेशिनमा र्यामको मात्रामा निर्भर गर्दछ।
TIFF का लागि यो TIFF फाईल नियमित हो वा संकुचित छ त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ। TIFF सीमा 4GB आकारमा छ जब डिस्कमा बचत गरियो। कम्प्रेसन विकल्पहरूले मद्दत गर्न सक्छन्। IF फाईल आकार> GB जीबी र TIF असफल हुनेछ। JPEG / JFIF अधिकतम छवि आकार465,535। × ,×,65,535 p पिक्सेल समर्थन गर्दछ, त्यसैले १: १ को एक अनुपात अनुपातको लागि g गिगापिक्सल सम्म। एप्पलको पूर्वावलोकन अनुप्रयोगसँग P०,००० × ,4०००० को JPEG को निर्यातको लागि सीमा छ।
धेरै ठूला फाईलहरूको साथ यी iWatermark द्रुत बनाउनका लागि राम्रा सुझावहरू छन्
१. प्रगति सम्वाद नदेखाउनुहोस्।
२. यदि खुला छ भने पूर्वावलोकन विन्डो बन्द गर्नुहोस्।
Water. वाईटरमार्क प्रबन्धकमा पूर्वावलोकन बन्द गर्नुहोस् शीर्ष मा डिभाइडर तान्दै।
Q: म लाइटरूम प्रयोग गर्छु। किन म iWatermark प्रयोग गर्नु पर्छ?
A: आईवटरमार्कले लाइटरूममा उपलब्ध नभएको वाटरमार्किंग उपकरणहरू प्रदान गर्दछ। उदाहरणको लागि, लाइटरूममा टेक्स्ट वाटरमार्क पिक्सेलमा एक निश्चित आकार हो ताकि वाटरमार्क फोटोहरूको वाटरमार्क हुने रिजोलुसनको आधारमा फरक हुनेछ। जबकि आईवटरमार्कसँग टेक्स्ट वाटरमार्कहरू छन् जुन वैकल्पिक रूपमा रिजोलुसन वा पोर्ट्रेट / लन्स्केपमा निर्भरता मापन गर्दछ। लाइटरूमले वाटरमार्क स्थान निर्धारण गर्न पिक्सलहरू प्रयोग गर्दछ जबकि iWatermark स्थिति वाटरमार्क समानुपातिक रूपमा फेरि एस्लेसन वा पोर्ट्रेट / लन्स्केपमा आधारित हुन्छ। यसको मतलब यदि तपाइँ विभिन्न रिजोलुसनहरू र / वा ल्याण्डस्केप वा पोर्ट्रेट ओरिएन्टेशनका फोटाहरूको ब्याचलाई वाटरमार्क गर्नुहुन्छ कि iWatermark मा वाटरमार्क हुन सक्छ जुन यी सबै प्रकारका तस्बिरहरूमा उही देखिने / पहिचान राख्दछ। iWatermark मा मापन गर्न विकल्प छैन। यी २ ठूला फरक छन्।
Q: म्याकमा प्लगइनहरू, प्राथमिकता फाइलहरू र फोल्डरहरू छन् जहाँ वाटरमार्कहरू छन्?
A: सबै iWatermark फाईलहरूको स्थान।
उन्नत ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि बटन 'शो लाइब्रेरी फाईलहरू' क्लिक गर्नुहोस् जसले खोजीकर्तामा वाटरमार्क र अन्य ग्राफिक्स फाइलहरू देखाउँदछ।
उन्नत ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् र कि त बटन 'प्राथमिकता फाइल देखाउनुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस् जसले खोजीकर्तामा प्राथमिकता फाइल देखाउँदछ। यदि तपाईं आफैं तल पुस्तकालय खोज्न चाहानुहुन्छ भने याद गर्नुहोस् खोज्नुहोस् मेनूमा विकल्प लाइब्रेरी लाइब्रेरीमा क्लिक गर्नुहोस्। एप्पलले सामान्य प्रयोगबाट पुस्तकालय फोल्डरलाई लुकाउँछ।
म्याकHD: प्रयोगकर्ताहरू: YourNameHere: पुस्तकालय: कन्टेनर: com.plumamazing.iwatermarkpro: डाटा: पुस्तकालय: प्राथमिकता: com.plumamasing.iwatermarkpro.plist
IWatermark प्रो <1.72 को पुरानो संस्करण को लागी
फोटो प्लगइन स्थापित छ:
~ / पुस्तकालय / अनुप्रयोग समर्थन / iPhoto / प्लगइनहरू /
द्रुत लग प्लगइन यसमा स्थापना गरिएको छ:
/ लाइब्रेरी / द्रुतलूक (जस्तै सबै प्रयोगकर्ताहरूका लागि - यसलाई प्रशासन खाता चाहिन्छ)।
एपर्चर प्लगइनहरू यसमा स्थापना गरिएको छ:
Library / पुस्तकालय / अनुप्रयोग समर्थन / एपर्चर / प्लग-इन / निर्यात /
Library / पुस्तकालय / अनुप्रयोग समर्थन / एपर्चर / प्लग-इन / सम्पादक /
IWatermark प्रो मेनूबाट प्लगइनहरूको स्थापनाकर्ता डाउनलोड गर्न को लागी, 'iPhoto र एपर्चर प्लगइन र फन्ट स्थापना गर्न स्थापनाकर्ता डाउनलोड गर्नुहोस्' छनौट गर्नुहोस्। वा तपाईं यहाँ स्थापनाकर्ता डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ:
निम्न फोल्डरहरू पहिले नै अवस्थित हुनुपर्दछ तर ती iPhoto र एपर्चर प्लगइनहरू राख्न स्थापनाकर्ताको लागि अवस्थित हुनुपर्दछ:
। / पुस्तकालय / अनुप्रयोग समर्थन / एपर्चर / प्लग-इन / सम्पादक
। / पुस्तकालय / अनुप्रयोग समर्थन / एपर्चर / प्लग-इन / निर्यात
। / पुस्तकालय / अनुप्रयोग समर्थन / आईफोटो / प्लगइनहरू
यदि स्थापनाकर्तासँग समस्या छ कि भनेर जाँच गर्न तिनीहरू त्यहाँ छन् कि भनेर। विकल्प कुञ्जी तल होल्ड गर्नुहोस् र पुस्तकालय फोल्डर पहुँच गर्न गो मेनू चयन गर्नुहोस्। त्यसोभए अनुप्रयोग समर्थन फोल्डर जाँच गर्नुहोस् र यदि तिनीहरू त्यहाँ छैनन् भने तपाईं मैन्युअल्ली सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। वा यदि तपाईं टर्मिनलसँग परिचित हुनुहुन्छ भने टर्मिनलमा निम्न प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्।
mkdir -p ~ / पुस्तकालय / अनुप्रयोग समर्थन / एपर्चर / प्लग-इन / सम्पादक
mkdir -p Library / पुस्तकालय / अनुप्रयोग समर्थन / iPhoto / प्लगइनहरू
रेकर्डका लागि यी प्लगइनहरू हुन् जुन ती फोल्डरहरूमा जान्छन्।
iWatermarkAperture Export.ApertureExport निर्यात फोल्डरमा जान्छ
iWatermarkAperture Stomper.ApertureEdit सम्पादक फोल्डरमा जान्छ
iWaterMarkFileExporter.iPhotoExporter आईफोटो / प्लगइन्स फोल्डरमा जान्छ
Q: म कसरी प्लगइनहरूको स्थापना रद्द गर्दछु।
A: आईफोटो र एपर्चरमा iWatermark प्लगइनहरूको स्थापना रद्द गर्न
१. iPhoto एप्लिकेसन बन्द गर्नुहोस् यदि यो चलिरहेको छ।
२. फाइन्डरमा गो मेनू चयन गर्नुहोस् -> फोल्डरमा जानुहोस् प्रकारमा:
नयाँ खोजीकर्ता विन्डो खुल्नेछ जुन तपाईंलाई प्लगइन फोल्डर देखाउँदै।
Delete. आईफोटो प्लगइन फोल्डरमा "iWaterMarkFileExporter.iPhotoExporter" हटाउनुहोस्।
IP. iPhoto सुरुवात गर्नुहोस्। निर्यात गर्नका लागि फोटो चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि चयन गर्नुहोस्:
iWatermark प्लगइन जानु पर्छ ताकि तपाईं अबदेखि प्लगइन चयन गर्न सक्नुहुन्न।
१. यदि चालु छ भने एपर्चर अनुप्रयोग बन्द गर्नुहोस्।
२. फाइन्डरमा गो मेनू चयन गर्नुहोस् -> फोल्डरमा जानुहोस् यस प्रकारमा: ~ / पुस्तकालय / अनुप्रयोग समर्थन / एपर्चर / प्लग-इन / सम्पादक
I. "iWatermark Stomper.ApertureEdit" हटाउनुहोस्।
The. फाइन्डरमा गो मेनू चयन गर्नुहोस् -> फोल्डरमा जानुहोस् यस प्रकारमा: Library / पुस्तकालय / अनुप्रयोग समर्थन / अपर्चर / प्लग-इन / निर्यात
Delete. "iWatermarkApertures.ApertureExport" हटाउनुहोस्।
वाटरमार्क साझेदारी गर्दै
वाटरमार्कहरू र ईमेल निर्यात गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई अर्को कम्प्युटरहरूमा प्रयोगको लागि फोटो नोटरी, ड्रपबक्स, गुगल ड्राईव वा स्काईड्राइभ फोल्डरहरूमा राख्नुहोस्। म्याकहरू बीच अब अन्य कम्प्युटरहरू र मोबाइल उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ड्रपबक्स - क्लिक गरेर २ जीबी स्पेसको साथ नि: शुल्क खाता पाउनुहोस् यहाँ.
गुगल ड्राईव - खाता प्राप्त गर्नुहोस् यहाँ GB जीबी नि: शुल्क। गुगल ड्राईवको अवलोकन यहाँ.
OneDrive - एक खाता प्राप्त गर्नुहोस् यहाँ र GB जीबी नि: शुल्क।
म्याकमा कसैले एकपटक पठाउँदछ (ईमेल वा माथिको सेवाहरू मध्ये एक मार्फत) तपाईले निर्यात गरिएको वाटरमार्क केवल दुई पटक क्लिक गर्नुहोस् यसलाई खोल्न / स्थापना गर्नका लागि तपाइँको म्याकको आईवटरमार्क प्रोको संस्करणमा स्थापना गर्नुहोस्।
निर्यात गरिएको वाटरमार्कमा आइकन छ जुन यस्तो देखिन्छ।
डिजिटल वाटरमार्किंग - या मिडिया फाइलमा जानकारी सम्मिलित गर्ने प्रक्रिया जुन यसको प्रामाणिकता वा यसको मालिकहरूको पहिचान प्रमाणीकरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
वाटरमार्क - एक दृश्य र / वा अदृश्य डिजिटल वाटरमार्क जसले डिजिटल मिडियाको एक विशेष टुक्राको मालिकलाई पहिचान गर्छ।
दृश्य डिजिटल वाटरमार्क-फोटोमा देखिने जानकारी। सामान्यतया, जानकारी पाठ वा लोगो हो जुन फोटोको मालिकलाई पहिचान गर्दछ। त्यो जानकारी छवि जानकारीमा मर्ज गरिएको छ तर अझै दृश्यमान छ।
अदृश्य डिजिटल वाटरमार्क- जानकारी तस्विर को छवि डाटा भित्र सम्मिलित तर मानव दृष्टि को लागि अबोध हुन डिजाइन गरिएको छ ताकि यो जानकारी लुकेको छ। स्टेगनोग्राफीले समान प्रविधि प्रयोग गर्दछ तर भिन्न उद्देश्यको लागि।
मेटाडाटा- कुनै पनि प्रकारको फाईल भित्र सम्मिलित जानकारी वर्णन गरिएको छ। सबै वस्तुहरू EXIF, XMP, र IPTC मुनि मेटाडाटा हुन् जुन फोटोमा थपिएको छ। मेटाडाटा वास्तविक छवि डाटा परिवर्तन गर्दैन तर फाईलमा piggybacks। फेसबुक, फ्लिकर र अन्य अनलाइन सामाजिक प्लेटफर्महरू यो सबै मेटाडाटा (EXIF, XMP र IPTC) हटाउँछ।
EXIF- Exif - विनिमेय छवि फाइल ढाँचा (Exif) मेटाडेटाको एक प्रकार जुन फोटोहरू भित्र सबै डिजिटल क्यामेरा भण्डार गर्दछ। EXIF भण्डारहरूले निश्चित जानकारी जस्तै मिति र समय लिएको छ, क्यामेरा सेटि settingsहरू, थम्बनेल, विवरणहरू, GPS, र प्रतिलिपि अधिकार। यो जानकारी परिवर्तन हुनको लागि होईन तर यसलाई वैकल्पिक रूपमा फोटोबाट हटाउन सकिन्छ। विशिष्टताले अवस्थित JPEG, TIFF Rev. 6.0, र RIFF WAV फाइल स्वरूपहरू प्रयोग गर्दछ, विशिष्ट मेटाडाटा ट्यागहरूको थपको साथ। यो JPEG 2000, PNG, वा GIF मा समर्थित छैन।
आईपीटीसी- एक फाईल संरचना र मेटाडाटा एट्रिब्यूटहरूको सेट हो जुन पाठ, छवि, र अन्य मिडिया प्रकारहरूमा लागू गर्न सकिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस दूरसञ्चार काउन्सिल (आईपीटीसी) द्वारा अखबार र समाचार एजेन्सीहरु बीच अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको अन्तर्राष्ट्रिय आदान प्रदान गर्न विकसित भएको हो।
एक्सएमपि- एक्स्टेन्सिबल मेटाडेटा प्लेटफार्म (XMP) एक विशिष्ट प्रकारको एक्स्टेन्सिबल मार्कअप भाषा हो जुन मेटाइन्छ डाटाको फोटो डिजिटलमा राख्न। XMP आईपीटीसी उपभोक्ता छ। XMP लाई २००१ मा Adobe द्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो। Adobe, IPTC, र IDEAlliance ले २०० 2001 मा XMP को लागि IPTC कोर स्किमा पेश गर्न सहयोग गर्‍यो, जसले IPTC हेडरबाट मेटाडेटा मानहरू अधिक आधुनिक र लचिलो XMP मा स्थानान्तरण गर्दछ।
ट्याग- मेटाडेटाको एक टुक्रा हो। प्रत्येक आईएफआईएफ, आईपीटीसी, र एक्सएमपी भित्र आईटम ट्याग हो।
विविध लिंक र जानकारी
OS X Lion: समर्थित डिजिटल क्यामेरा RAW ढाँचाहरू
म्याक OS X v10.6: समर्थित डिजिटल क्यामेरा RAW ढाँचाहरू
एपर्चर:: अपडेट गरिएको RAW प्रोसेसिंग
एपर्चर १, २,:: कच्चा समर्थन (माथि ओएस एक्स शेरको सूची जस्तो देखिन्छ)
म्याकका लागि आईवटरमार्क प्रो स्क्रिप्ट गर्न योग्य छ र यसमा एप्प्लस्क्रिप्ट शब्दकोश छ। यसको मतलब तपाई iWatermark ले काम गर्ने तरीकालाई स्वचालित गर्न सक्नुहुन्छ। अब जबकि iWatermark यो क्षमता प्रयोगकर्ताहरू (तपाईं) आईवटरमार्क काम गर्नका लागि अन्य स्क्रिप्टहरू बनाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईं प्रयोग गर्नुहुन्छ। तल एक सरल अपस्क्रिप्ट छ जुन दिनको काममा उपयोगी नहुन सक्छ तर iWatermark कसरी स्क्रिप्ट गर्ने भनेर देखाउँदछ।
कृपया बुझ्नुहोस् कि हामी तपाईंलाई एप्पलस्क्रिप्टहरू बनाउन मद्दत गर्न सक्दैनौं। तपाईसँग केहि गर्न चाहानुहुन्छ र तपाई आफैं गर्न चाहानु हुन्न भने हामी घण्टामा भाडा लिन सक्दछौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस। तर AppleScript सिक्न र रमाईलो गर्न को लागी तुलना गर्न सजिलो छ। केहि साधारणसँग सुरू गर्नुहोस् र त्यहाँबाट निर्माण गर्नुहोस्।
IWatermark प्रो को लागी Applescriptts
एप्स्क्रिप्ट भाषा गाइड एप्पल मा
एप्स्क्रिप्टका लागि ट्यूटोरियल
कृपया हामीलाई सिर्जना स्क्रिप्टहरू पठाउनुहोस् यदि उनीहरू अत्यन्त सरल छन् भने हामी अरूसँग पनि साझेदारी गर्न सक्दछौं।
A: हो। डाउनलोड गर्न माथिको उदाहरण अनुप्रयोगमा ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि एप्पलस्क्रिप्ट ठूलो + थम्बनेलहरू। एप्लिकेशन स्क्रिप्ट चयन गर्नुहोस्। लिपिले के गर्छ भन्ने बारे थप विवरण र यसले कसरी तल काम गर्दछ।
मेटाईडेटा र थम्बनेलको साथ २ s1024 x २ 768 (मेटाडाटा बिना) २ आकारको ठूलो छविमा पुनःआकारित छवि सिर्जना गर्दछ, "थम्ब_" सँग उपसर्ग भएको मान्नुहोस् तपाईले iWatermark प्रोमा अन्य सेटिंग्स सेट अप गर्नुभयो तपाईको इच्छा अनुसार (जस्तै): आउटपुटका लागि पुन: नामाकरण प्रारूप नामले "उपसर्ग" ट्याग प्रयोग गर्नुपर्दछ। हामी उपसर्ग "थम्ब _" मा सेट गर्दछ - चयनित इनपुट फाईलहरू, - वाटरमार्क प्रयोग गर्न, - आउटपुट ढाँचा- र एक विकल्प तल सूचीबद्ध छैन: लिपिले ठूलो छविहरूको लागि JPG गुणमा changes 256 मा परिवर्तन गर्दछ। स्क्रिप्टले JPG गुणलाई thumb 256 मा थम्बनेल छविहरू आउटपुट संरचना फ्ल्याट फोल्डरहरूमा सेट आउट गर्दछ। उपसर्गलाई "थम्ब_" मा पुनःनामाकरण गर्नुहोस् स्क्रिप्टले ठूलो वा थम्बनेलको आधारमा वाटरमार्किंग सक्रिय / बन्द गर्न सक्दछ र स्याट मेटाडाटा खोल्नुहोस् र ठूला छविहरूका लागि जीपीएस डाटा (जीओ स्थान) हटाउनुहोस्। मेटाडाटा सेभ गर्नुहोस् बन्द गर्नुहोस् र GPS डाटा हटाउनुहोस् थम्बनेल छविहरूका लागि अझै सक्रिय छ। थम्बनेलको 85२ dpi मा dpi चित्रण गर्न ठूला छविहरूको लागि DPI सेट गर्नुहोस्
विन्डोज संस्करणको लागि विशेष जानकारी
१.१. instal स्थापनाकर्ताको लागि कमान्ड कमाण्ड लाइन स्थापना गर्नुहोस्:
iWatermarkPro.win.x86x64.1.1.2.exe [/ स्थापना | / स्थापना रद्द गर्नुहोस्] [/ शान्त] [/ लग]
आदेश रेखा तर्कहरूको मद्दत हेर्न
त्यहाँ कमान्ड लाइन तर्कमा धेरै विकल्पहरू छन् तर तलका तर्कहरू समर्थित र परीक्षण गरिएका छन्:
/ स्थापना गर्नुहोस्
/ स्थापना रद्द गर्नुहोस्
कृपया iWatermark मा समर्थन विकल्पहरूको लागि तल हेर्नुहोस्।
क्रम संख्या पुन: प्राप्त गर्नुहोस्
IWatermark र iWatermark प्रो को लागी क्रम संख्या फरक छ। यदि तपाईं आई-वाटरमार्कको मालिक हुनुहुन्छ र अपग्रेड गर्न चाहानुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामीलाई ईमेल र नाम दिनुहोस् जुन तपाईं अन्तर्गत अर्डर हुनुभयो।
हामी तपाइँबाट सुन्न रमाईलो गर्दछौं।
बेर आश्चर्यजनक मा मान्छे
b वाटरमार्क सम्पादक
२. फिल्टर गर्दै
Res. पुनःआकार गर्दै
Ren. पुन: नामाकरण
EX. EXIF ​​/ IPTC / XMP